Myanmar Spring Revolution's Fallen Heroes
Over 750++ Nway Oo Heroes have fallen already in suchashort time since Feb 1 Coup.
Biographies of Fallen Nway Oo Heroes
Htut Myat Linn
အသက် ၁၄ နှစ်အရွယ်ရှိ ကိုထွဋ်မြတ်လင်းဟာ ၂၀၂၁ ခုနှစ် မတ်လ ၁၆ ရက် ညတွင် ဘုတ်ပြင်းမြို့နယ် ပြည်ကြီးမဏ္ဍိုင်၌ ရဲနှင့်စစ်တပ်၏ အကြမ်းဖက်ပစ်ခတ်မှုကြောင့် ကျည်ဆံထိမှန်ကာ ကျဆုံးခဲ့ရပါတယ်။
ကိုထွဋ်မြတ်လင်းဟာ ရှစ်တန်းကျောင်းသား တစ်ဦးဖြစ်ပြီး ဥယျာဉ်ခြံမှ အပြန် ည ၈ နာရီထိုးသွားတာကြောင့် စစ်တပ်က အော်လို့ ဆိုင်ကယ်ရပ်လိုက်ချိန်မှာ အပစ်ခံလိုက်ရကြောင်း သိရပါတယ်။
Kyaw Thiha Aye
အသက် ၄၁ နှစ်အရွယ်ရှိ ကိုကျော်သီဟအေးဟာ ၂၀၂၁ ခုနှစ် မတ်လ ၁၅ ရက်နေ့တွင် ရန်ကုန်၌ ရဲနှင့်စစ်တပ်၏ အကြမ်းဖက်ဖြိုခွင်းပစ်ခတ်မှုကြောင့် ကျည်ဆံထိမှန်ကာ ကျဆုံးခဲ့ရပါတယ်။
ကိုကျော်သီဟအေးဟာ မင်းတုန်းမင်းမျိုးဆက် ညောင်ရမ်းထိပ်တင်အေး၏ မြေးတော်စပ်သူဖြစ်ပြီး ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ တာမွေမြို့နယ်၊ မြို့ပါတ်ဝင်းတွင် နေထိုင်ပါတယ်။
အသက် ၁၄ နှစ်အရွယ်ရှိ ကိုစိုင်းဝေယံဟာ ၂၀၂၁ ခုနှစ် မတ်လ ၂၇ ရက်နေ့တွင် မင်္ဂလာတောင်ညွှန့် မီးရထားဝင်း၌ ရဲနှင့်စစ်တပ်၏ အကြမ်းဖက်ဖြိုခွင်းပစ်ခတ်မှုကြောင့် ဦးခေါင်းကို ကျည်ဆံထိမှန်ကာ ကျဆုံးခဲ့ရပါတယ်။
ကိုစိုင်းဝေယံဟာ အခန်း ၅ မီးရထားရပ်ကွက်မှာ နေထိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။ စစ်သားများက ရုပ်အလောင်းကို ပြန်မပေးဘဲ ဆာလာအိတ်နဲ့ထည့်ကာ မိဘ​တွေကို သေနတ်နဲ့ချိန် မောင်းထုတ်ပြီး ကားနဲ့သယ်သွားကြောင်း သိရပါတယ်။
Nay Lin Htwe
အသက် ၂၈ နှစ်အရွယ်ရှိ ကိုနေလင်းထွေးဟာ ၂၀၂၁ ခုနှစ် မတ်လ ၂၅ ရက်နေ့တွင် တောင်ကြီးမြို့၊ ကံသာရပ်ကွက်၌ စစ်ကောင်စီလက်နက်ကိုင် အဖွဲ့များ၏ အကြမ်းဖက်ပစ်ခတ်မှုကြောင့် ကျည်ဆံထိမှန်ကာ ကျဆုံးခဲ့ရပါတယ်။
ကိုနေလင်းထွေးဟာ တောင်ကြီးမြို့ရဲ့ ပထမဆုံးကျဆုံးသွားတဲ့ သူရဲကောင်းဖြစ်ပြီး ရုပ်အလောင်းကို လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်များက သယ်ယူသွားခဲ့ပါတယ်။
အသက် ၁၉ နှစ်အရွယ်ရှိ ကိုဝဏ္ဏကျော်ဟာ ၂၀၂၁ ခုနှစ် မတ်လ ၁၄ ရက်နေ့တွင် လှိုင်သာယာ၌ ရဲနှင့်စစ်တပ်၏ အကြမ်းဖက်ဖြိုခွင်းပစ်ခတ်မှုကြောင့် ကျည်ဆံထိမှန်ကာ ကျဆုံးခဲ့ရပါတယ်။
အသက် ၃၁ နှစ်အရွယ်ရှိ ကိုအေးကျော်ဟာ ၂၀၂၁ ခုနှစ် မတ်လ ၁၇ ရက်နေ့တွင် တောင်ဥက္ကလာ၌ ရွှေရောင်းရန် စက်ဘီးနှင့် ထွက်လာစဉ် ရဲနှင့်စစ်တပ်၏ အကြမ်းဖက်ပစ်ခတ်မှုကြောင့် ဝမ်းဗိုက်နဲ့ နှလုံးကြားကို ကျည်ဆံထိမှန်ကာ ကျဆုံးခဲ့ရပါတယ်။
ကိုအေးကျော်ဟာ တောင်ဥက္ကလာ ၁၃ ရပ်ကွက် (၁၈) လမ်းတွင် နေထိုင်သူဖြစ်ပြီး ကျဆုံးချိန်မှာ ဇနီးဖြစ်သူနှင့် သမီးလေးတစ်ယောက် ကျန်ရစ်ခဲ့ပါတယ်။ ဇနီးသည်က မင်္ဂလာဒုံစစ်ဆေးရုံသို့ လိုက်သွားသော်လည်း ရုပ်အလောင်းကို ပြန်မပေးတဲ့အပြင် ရွှေထည်ပစ္စည်းများကိုပါ ယူသွားကြောင်း သိရပါတယ်။
Thet Paing Soe
အသက် ၂၈ နှစ်အရွယ်ရှိ ကိုသက်ပိုင်စိုးဟာ ၂၀၂၁ ခုနှစ် မတ်လ ၂၀ ရက်နေ့ မွန်းလွဲပိုင်းတွင် တာမွေမြို့နယ် ကျောက်မြောင်းရပ်ကွက် ကျားကွက်သစ် မြို့သစ် ၂ လမ်းနဲ့ ကျောက်ရေတွင်းလမ်းထောင့်၌ ရဲနှင့်စစ်တပ်၏ အကြမ်းဖက်ဖြိုခွင်းမှုကြောင့် ကျည်ဆံထိမှန်ကာ ကျဆုံးခဲ့ရပါတယ်။
မိဘများဟာ စစ်တပ်မှဖြစ်သော်လည်း ကိုသက်ပိုင်စိုးဟာ မိဘနှင့်ခွဲပြီး တာမွေမှာ သူငယ်ချင်းများနှင့်အတူ နေထိုင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ ကျဆုံးပြီးနောက် ရုပ်အလောင်းကို စစ်တပ်နှင့် ရဲများက လိုက်လံရှာဖွေနေသည့်အတွက် ဈာပနကို နေ့တွင်းချင်း ပြုလုပ်ခဲ့ရပါတယ်။
အသက် ၇ နှစ်သမီးလေး မခင်မျိုးချစ်ဟာ ၂၀၂၁ ခုနှစ် မတ်လ ၂၃ ရက်နေ့တွင် မန္တလေးမြို့၊ ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ်၊ အောင်ပင်လယ်ရှိ 52(C) 105 106 နေအိမ်၌ စစ်တပ်၏ အကြမ်းဖက်ဝင်ရောက် ပစ်ခတ်မှုကြောင့် ဗိုက်ကို ကျည်ဆံထိမှန်ကာ ကျဆုံးခဲ့ရပါတယ်။
သူတို့အိမ်ထဲကို အကြမ်းဖက်စစ်သူပုန်အုပ်စုက တံခါးကိုဆောင့်ကန်ဖွင့်ပြီး ဝင်လာတဲ့အတွက်
"ဖေဖေ(ပါးပါး)သမီးကြောက်တယ်" လို့ မခင်မျိုးချစ်က ဖခင်ရဲ့ရင်ခွင်ထဲမှာ ပုန်းနေရင်း ပြောတဲ့အခါ စစ်တပ်က "ဘာကြောက်တာတုန်း"ဆိုပြီး ကလေးကို သေနတ်နဲ့ ပစ်လိုက်ကြောင်း သိရပါတယ်။
မွတ်ဆလင်မလေး မခင်မျိုးချစ်ဟာ စစ်ကောင်စီလက်ချက်နဲ့ သေဆုံးသူတွေထဲမှာ လက်ရှိ အသက်အငယ်ဆုံး ဖြစ်ပြီး မတ်လ ၂၄ ရက်နေ့တွင် ဇာတိမြေ မန္တလေးမှာပဲ အစ္စလာမ်ဘာသာထုံးစံအတိုင်း သင်္ဂြိုဟ်ခဲ့ပါတယ်။
Aung Kaung Htet
အသက် ၁၅ နှစ်အရွယ်ရှိ ကိုအောင်ကောင်းထက်ဟာ ၂၀၂၁ ခုနှစ် မတ်လ ၂၀ ရက်နေ့တွင် သာကေတ (၆) အရှေ့ရပ်ကွက်၌ ရဲနှင့်စစ်တပ်၏ အကြမ်းဖက်ပစ်ခတ်မှုကြောင့် ပါးကို ကျည်ဆံထိမှန်ကာ ကျဆုံးခဲ့ရပါတယ်။
ကိုအောင်ကောင်းထက်ဟာ အထက်တန်းကျောင်းသားဖြစ်ပြီး သာကေတမြို့နယ် (၆) အရှေ့ရပ်ကွက်၊ ရွှေပြည်သာလမ်းမှာ နေထိုင်ပါတယ်။
အသက် ၁၆ နှစ်အရွယ်ရှိ ကိုမင်းမင်းဦးဟာ ၂၀၂၁ ခုနှစ် မတ်လ ၁၉ ရက်နေ့တွင် မန္တလေးမြို့ ၄၁လမ်း ၈၃လမ်း၌ ရဲနှင့်စစ်တပ်၏ အကြမ်းဖက်ဖြိုခွင်းမှုကြောင့် ရင်ဘတ်ကို ကျည်ဆံထိမှန်ကာ ကျဆုံးခဲ့ရပါတယ်။
ကိုမင်းမင်းဦးဟာ ကိုးတန်းကျောင်းသားဖြစ်ပြီး ကျဆုံးပြီးနောက် ရုပ်အလောင်းကို ပြန်မရခဲ့တဲ့အတွက် ရွှေမဟာနွယ်အေးရိပ်ငြိမ်သုသာန်တွင် အလောင်းမဲ့ ဂူသွင်းသဂြိုလ်ခဲ့ရပါတယ်။
အသက် ၂၄ နှစ်အရွယ်ရှိ ကိုမြတ်စိုးဟာ ၂၀၂၁ ခုနှစ် မတ်လ ၁၉ ရက်နေ့တွင် အောင်ပန်းမြို့ မိုးကောင်းရပ်ကွက် နယ်မြေ ၁ ၌ ရဲနှင့်စစ်တပ်၏ အကြမ်းဖက်ဖမ်းဆီးခြင်းခံရပြီးနောက် ဦးခေါင်းကို သေနတ်နှင့်ပစ်ခံရကာ ကျဆုံးခဲ့ရပါတယ်။
ကိုမြတ်စိုးဟာ အောင်ပန်း အောက်စျေးမှ ပွဲစားတစ်ဦးဖြစ်ပြီး ရုပ်အလောင်းကို ပြန်မရဘဲ သင်္ဂြိုဟ်လိုက်ရပါတယ်။
အသက် ၃၆ နှစ်အရွယ်ရှိ ကိုကျော်သူဝင်းဟာ ၂၀၂၁ ခုနှစ် မတ်လ ၁၉ ရက်နေ့တွင် အောင်ပန်းမြို့၌ ရဲနှင့်စစ်တပ်၏ အကြမ်းဖက်မှုကြောင့် ကျည်ဆံထိမှန်ကာ ကျဆုံးခဲ့ရပါတယ်။
ကိုကျော်သူဝင်းဟာ အောင်ပန်း အမှတ် ၂ ရပ်ကွက်မှာ နေထိုင်တာဖြစ်ပြီး သပိတ်စစ်ကြောင်းမှာ အမြဲတက်ကြွစွာ ပါဝင်ခဲ့သူ ဖြစ်ပါတယ်။
Khun Kyaw Swar Linn
အသက် ၄၁ နှစ်အရွယ်ရှိ ကိုခွန်ကျော်စွာလင်းဟာ ၂၀၂၁ ခုနှစ် မတ်လ ၁၉ ရက်နေ့တွင် လှိုင်မြို့နယ် သုခမှတ်တိုင်အနီး၌ ရဲနှင့်စစ်တပ်၏ အကြမ်းဖက်ဖြိုခွင်းပစ်ခတ်မှုကြောင့် ကျည်ဆံထိမှန်ကာ ကျဆုံးခဲ့ရပါတယ်။
ကိုခွန်ကျော်စွာလင်းဟာ ရန်ကုန်တိုင်း လှိုင်မြို့နယ် (၆) ရပ်ကွက် သုခလမ်း တိုက် (၁၉၁) တွင် နေထိုင်တာဖြစ်ပြီး ကျဆုံးချိန်မှာ ဇနီးဖြစ်သူနှင့် သမီးလေးတစ်ယောက် သားတစ်ယောက် ကျန်ရစ်ခဲ့ပါတယ်။
Myo Myint Aung
အသက် ၂၇ နှစ်အရွယ်ရှိ ကိုမျိုးမြင့်အောင်ဟာ ၂၀၂၁ ခုနှစ် မတ်လ ၁၉ ရက် ညဘက်တွင် လှိုင်မြို့နယ် သုခမှတ်တိုင်အနီး၌ အကြမ်းဖက်ပစ်ခတ်မှုကြောင့် လက်ကို ကျည်ထိမှန်ခဲ့ရပါတယ်။ ထို့နောက် စစ်တပ်မှ ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားပြီး ချိုင်းအောက်သို့ ကျည်ဖောက်ဝင်သော ဒဏ်ရာဖြင့် အဆုတ်နှင့်နှလုံးပျက်စီးကာ မင်္ဂလာဒုံ ကုတင်တစ်ထောင်စစ်ဆေးရုံတွင် ကျဆုံးခဲ့ပါတယ်။
ကိုမျိုးမြင့်အောင်ဟာ အင်ဂျင်နီယာဖြစ်ပြီး လှိုင်မြို့နယ်မှာ နေထိုင်ပါတယ်။ ရုပ်အလောင်းကို မတ်လ ၂၁ ရက်​နေ့တွင် ထိန်ပင်သုသာန်၌ မီးသင်္ဂြိုဟ်ခဲ့ပါတယ်။
Naing Lin Aung
အသက် ၃၀ နှစ်အရွယ်ရှိ ကိုနိုင်လင်းအောင်ဟာ ၂၀၂၁ ခုနှစ် မတ်လ ၁၉ ရက် ည ၁၁ နာရီ​ကျော်တွင် မိုးကုတ်မြို့နယ်၊ လယ်ဦး​ကျေးရွာ၌ ညပိုင်းကင်းစောင့်နေစဉ် ရဲနှင့်စစ်တပ်၏ အကြမ်းဖက်ပစ်ခတ်မှုကြောင့် ဦးခေါင်းကို ကျည်ဆံထိမှန်ကာ ကျဆုံးခဲ့ရပါတယ်။
ကိုနိုင်လင်းအောင်ဟာ မိုးကုတ်မြို့နယ် ကြက်ခြေနီသူနာပြုတပ်ဖွဲ့၀င်ဖြစ်ပြီး နာရေးကို ဗမွန်သုသာန်တွင် ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။
Aung Ko Ko Khant
အသက် ၂၇ နှစ်အရွယ်ရှိ ကိုအောင်ကိုကိုခန့်ဟာ ၂၀၂၁ ခုနှစ် မတ်လ ၁၅ ရက်နေ့တွင် မြင်းခြံမြို့၌ ရဲနှင့်စစ်တပ်၏ အကြမ်းဖက်ပစ်ခတ်မှုကြောင့် မျက်နှာကို ကျည်ဆံထိမှန်ကာ မတ်လ ၁၉ ရက်နေ့တွင် ကျဆုံးခဲ့ရပါတယ်။
ကိုအောင်ကိုကိုခန့်ဟာ မြင်းခြံမြို့ အမှတ် ၆ ရပ်ကွက်တွင် နေထိုင်တာဖြစ်ပြီး ကျဆုံးချိန်မှာ ဇနီးဖြစ်သူနှင့် သားငယ်လေးတစ်ဦး ကျန်ရစ်ခဲ့ပါတယ်။
အသက် ၂၃ နှစ်အရွယ်ရှိ ကိုသီဟဖြိုးဟာ ၂၀၂၁ ခုနှစ် မတ်လ ၁၈ ရက်ညတွင် မန္တလေးမြို့ ၊အောင်မြေသာစံမြို့နယ် ၊ ဒေါနဘွားရပ်ကွက် ၊ အုပ်စက်အကွက် ၁၃ ၌ ရဲနှင့်စစ်တပ်၏ အကြမ်းဖက်ပစ်ခတ်မှုကြောင့် ကျည်ဆံထိမှန်ကာ ကျဆုံးခဲ့ရပါတယ်။
ကိုသီဟဖြိုးဟာ ပန်းရံအလုပ်လုပ်သူ ဖြစ်ပြီး ရုပ်အလောင်းကို မတ် ၁၉ ရက် နေ့လည်တွင် အေးရိပ်ငြိမ်သုသာန်သို့ ပို့ဆောင်သင်္ဂြိုဟ်ခဲ့ပါတယ်။
Aye Aye Khaing
အသက် ၂၂ နှစ်အရွယ်ရှိ မအေးအေးခိုင်ဟာ ၂၀၂၁ ခုနှစ် မတ်လ ၁၈ ရက်နေ့ မြောက်ဥက္ကလာပမြို့နယ် ဘုန်းကြီးလမ်းတွင် ကွမ်းယာရောင်းနေစဥ် ရဲနှင့်စစ်တပ်၏ အကြမ်းဖက်ပစ်ခတ်မှုကြောင့် ဝမ်းဗိုက်ကို ကျည်ဆံထိမှန်ကာ ကျဆုံးခဲ့ရပါတယ်။
မအေးအေးခိုင်ဟာ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင် အမျိုးသမီးတစ်ဦးဖြစ်ပြီး မြောက်ဥက္ကလာပမြို့နယ် ၁ရပ်ကွက် ဘုန်းကြီးလမ်းမှာ နေထိုင်သူ ဖြစ်ပါတယ်။ စျာပနကို မတ်လ ၁၉ရက် နေ့လယ်ပိုင်းတွင် ရေဝေးသုဿာန်မှာ ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။
Aung Min Htun
အသက် ၃၁ နှစ်အရွယ်ရှိ ကိုအောင်မင်းထွန်း ခေါ် အောင်ကြီးဟာ ၂၀၂၁ ခုနှစ် မတ်လ ၁၆ ရက်နေ့တွင် မြောက်ဒဂုံ၌ ဒိုင်းကာရင်း ရဲနှင့်စစ်တပ်၏ အကြမ်းဖက်ပစ်ခတ်မှုကြောင့် ကျည်ဆံထိမှန်ကာ မတ် ၁၇ ရက်နေ့တွင် ကျဆုံးခဲ့ရပါတယ်။
ကိုအောင်ကြီးဟာ သံဂဟေဆော်ဆရာ ဖြစ်ပြီး ပုဂံလမ်း 16 B ကျုး မြောက်ဒဂုံမီးသတ်ရုံးအနောက်ဖက် မ.ဝ.တ လမ်းဆုံအနီးတွင် နေထိုင်ပါတယ်။ ကျဆုံးပြီးနောက် ဇနီးဖြစ်သူနှင့် သားသမီး ၄ ယောက် မွေးစားကလေး ၄ ယောက် စုစုပေါင်း ကလေး ၈ ယောက် ကျန်ရစ်ခဲ့ပါတယ်။
Kyaw Myint Win
အသက် ၄၂ နှစ်အရွယ်ရှိ ကိုကျော်မြင့်ဝင်းဟာ ၂၀၂၁ ခုနှစ် မတ်လ ၁၇ ရက်နေ့တွင် ကလေးမြို့ ချင်းတောင်တန်းဂိတ်အနီး၌ ရဲနှင့်စစ်တပ်၏ အကြမ်းဖက်ဖြိုခွင်းပစ်ခတ်မှုကြောင့် ကျည်ဆံထိမှန်ကာ ကျဆုံးခဲ့ရပါတယ်။
ကိုကျော်မြင့်ဝင်းဟာ တောင်ဖီလာရပ်ကွက်တွင် နေထိုင်တာဖြစ်ပြီး ကျဆုံးချိန်မှာ ဇနီးဖြစ်သူနှင့် သမီးလေး ၁ယောက် ကျန်ရစ်ခဲ့ပါတယ်။
အသက် ၄၂ နှစ်အရွယ်ရှိ ကိုကျော်ခိုင်ဟာ ၂၀၂၁ ခုနှစ် မတ်လ ၁၆ ရက် ညတွင် မုံရွာခရိုင် ချောင်းဦးမြို့၊ ချောင်ဦးတောင် ရဲလှရပ် ညသပိတ် ဆီမီးထွန်းဆုတောင်းပွဲ ပစ်ခတ်မှု၌ ဦးခေါင်းကို ကျည်ဆံထိမှန်ကာ ကျဆုံးခဲ့ရပါတယ်။
ကိုကျာ်ခိုင်ဟာ ကွမ်းယာဆိုင်ပိုင်ရှင်ဖြစ်ပြီး ချောင်းဦးတောင်ရပ်တွင် နေထိုင်ပါတယ်။ ကျဆုံးချိန်မှာ ဇနီးဖြစ်သူနှင့် သမီးတစ်ယောက် သားတစ်ယောက် ကျန်ရစ်ခဲ့ပါတယ်။
အသက် ၄၁ နှစ်အရွယ်ရှိ ကိုကျော်မင်းထွန်းဟာ ၂၀၂၁ ခုနှစ် မတ်လ ၁၆ ရက်နေ့မှာ စစ်ကိုင်းတိုင်း၊ ကောလင်းမြို့ ၊ မြို့မရဲစခန်းရှေ့တွင် ရဲနှင့်စစ်တပ်၏ အကြမ်းဖက်ဖြိုခွင်းပစ်ခတ်မှုကြောင့် ရင်ဘတ်ကို ကျည်ဆံထိမှန်ကာ ကျဆုံးခဲ့ရပါတယ်။
ကိုကျော်မင်းထွန်းဟာ ကောလင်းမြို့နယ်၊ မင်းကုန်းကျေးရွာမှာ နေထိုင်သူဖြစ်ပါတယ်။
အသက် ၂၉ နှစ်အရွယ်ရှိ ကိုကျော်ကျော်အောင်ဟာ ၂၀၂၁ ခုနှစ် မတ်လ ၁၅ ရက်နေ့တွင် ရန်ကုန်မြို့၊ ဒေါပုံမြို့နယ် ဝါဆိုအနီး ညသပိတ်၌ ရဲနှင့်စစ်တပ်၏ အကြမ်းဖက်ပစ်ခတ်မှုကြောင့် ကျည်ဆံထိမှန်ခဲ့ပါတယ်။ သေနတ်ဒဏ်ရာနဲ့ မြောင်းထဲလဲကျနေစဉ် စစ်တပ်မှ ဆွဲတင်ပြီး သူ့အဝတ်အစားများကို ချွတ်၍ မြေပေါ် ဒရွတ်တိုက်ဆွဲကာ သေနတ်နှင့် ၂ ချက် ထပ်ပစ်ခဲ့သဖြင့် ကျဆုံးသွားခဲ့ရပြီး အလောင်းကို စစ်ကားနဲ့ သယ်သွားခဲ့ပါတယ်။
ကိုကျော်ကျော်အောင်ဟာ ဒေါပုံမြို့နယ် ဆေးစက်ရပ်ကွက် ဘုရင့်နောင်၂လမ်းမှာ နေထိုင်တာဖုစ်ပြီး ရုပ်အလောင်းကို ကျီစုသုသာန်တွင် သင်္ဂြိုဟ်ခဲ့ပါတယ်။ ဇနီးဖြစ်သူဟာ မနှစ်က ဆုံးပါးသွားတာဖြစ်ပြီး ကျဆုံးချိန်မှာ မိခင်ဖြစ်သူနှင့် ၃ နှစ်အရွယ် သားလေး ကျန်ရစ်ခဲ့ပါတယ်။
Aung Phyo Htet
အသက် ၂၉ နှစ်အရွယ်ရှိ ကိုအောင်ဖြိုးထက်ဟာ ယုဇနဥယျာဉ်မြို့တော်မှာ နေထိုင်သူဖြစ်ပြီး ၂၀၂၁ ခုနှစ် မတ်လ ၁၄ ရက်နေ့တွင် ရဲနှင့်စစ်တပ်၏ အကြမ်းဖက်ပစ်ခတ်မှုကြောင့် ဦးခေါင်းကို ကျည်ဆံထိမှန်ကာ ကျဆုံးခဲ့ရပါတယ်။
ကိုအောင်ဖြိုးထက် ရုပ်အလောင်းကို ပြန်လည်တွေ့ရှိချိန်တွင် ဦးခေါင်းရှိ သေနတ်ဒဏ်ရာအပြင် ရင်ဘတ်ကို ခွဲစိတ်ပြီး ပြန်ချုပ်ထားသည်ကို တွေ့ရပါတယ်။ စျာပနကို မတ်လ ၁၇ ရက်နေ့ နေ့လည်ပိုင်းတွင် ရေ​ဝေးသုသာန်မှာ ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။
Thet Naing Aung
အသက် ၂၁ နှစ်အရွယ်ရှိ ကိုသက်နိုင်အောင် ခေါ် မိုဟမ္မဒ်ဂျိုနိုက်ဟာ မန္တလေးမြို့၊ ၄၁လမ်း၊ ပန်းဆက်ရပ်တွင် နေထိုင်သူဖြစ်ပြီး ၂၀၂၁ ခုနှစ် မတ်လ ၁၄ ရက်နေ့ ညပိုင်းတွင် ၅၄-၅၅ လမ်း၊ ၁၁၂ A မဉ္ဇူလမ်း၊ မြရည်နန္ဒာ ချမ်းမြသာစည် မန္တလေး၌ ရဲနှင့်စစ်တပ်၏ အကြမ်းဖက်ဖြိုခွင်းပစ်ခတ်မှုကြောင့် ကျည်ဆံထိမှန်ကာ ကျဆုံးခဲ့ရပါတယ်။
Kaung Myat Hein
အသက် ၃၀ နှစ်အရွယ်ရှိ ကိုကောင်းမြတ်ဟိန်းဟာ ၂၀၂၁ ခုနှစ် မတ်လ ၁၃ ရက်နေ့ မန္တလေးဆန္ဒပြပွဲ တွင် ရဲနှင့်စစ်တပ်၏ အကြမ်းဖက်ဖြိုခွင်းမှုကြောင့် (၄၁)လမ်းမှာ ပိတ်မိနေသူများကို သွားကယ်ရင်း ဗိုက်ကို ကျည်ဆံထိမှန်ကာ ကျည်ဆိပ်များ သွေးထဲပျံ့နှံ့သွားပြီး မတ်လ ၁၅ ရက်နေ့တွင် ကျဆုံးခဲ့ရပါတယ်။
ကိုကောင်းမြတ်ဟိန်းဟာ တက်တူးထိုးဆရာဖြစ်ပြီး ကျဆုံးချိန်မှာ ဇနီးဖြစ်သူနှင့် ၁၀ နှစ်အရွယ် သမီး တစ်ယောက်၊ ၆ နှစ်အရွယ် သမီးတစ်ယောက် ကျန်ရစ်ခဲ့ပါတယ်။ ရုပ်အလောင်းကို မတ် ၁၆ ရက်နေ့က ကြာနီကန်သုသာန်တွင် သင်္ဂြိုဟ်ခဲ့ပါတယ်။
Than Htike Oo
အသက် ၂၆ နှစ်အရွယ်ရှိ ကိုသန်းထိုက်ဦး ခေါ် ကိုမြမွှေးဟာ ၂၀၂၁ ခုနှစ် မတ်လ ၁၅ ရက်နေ့တွင် မန္တလေးမြို့၊ ရွာမလမ်း၊ ၅၂ နဲ့ ၅၃ လမ်းကြား၊ ခိုင်ရွှေဝါလမ်းဒေါင့်၌ ရဲနှင့်စစ်တပ်၏ အကြမ်းဖက်ပစ်ခတ်မှုကြောင့် ညာဘက်ချိုင်းအောက် ခန္ဓာကိုယ်ကို ကျည်ဆံ ထိုးချင်းပေါက်ဝင်ပြီး ကျဆုံးခဲ့ရပါတယ်။
ကိုသန်းထိုက်ဦးဟာ အောင်ပင်လယ်ရပ်ကွက်မှာ နေထိုင်တာဖြစ်ပြီး ရုပ်အလောင်းကို ကြာနီကန်သုသာန်တွင် သင်္ဂြိုဟ်ခဲ့ပါတယ်။
အသက် ၂၉ နှစ်အရွယ်ရှိ ကိုသီဟကျော်ဟာ ၂၀၂၁ ခုနှစ် မတ်လ ၁၅ ရက်နေ့တွင် မန္တလေးမြို့ ၊ ၁၁၂လမ်း ၅၄/၅၅လမ်းကြား၌ ရဲနှင့်စစ်တပ်၏ အကြမ်းဖက်ဖြိုခွင်းပစ်ခတ်မှုကြောင့် ရင်ဘတ်ကို ကျည်ဆံထိမှန်ကာ ကျဆုံးခဲ့ရပါတယ်။
ကိုသီဟကျော်ဟာ ၅၆လမ်း ၁၁၄လမ်း ချမ်းမြသာစည်မှာ နေထိုင်တာဖြစ်ပြီး ကျဆုံးချိန်မှာ ဇနီးဖြစ်သူနှင့် လေးနှစ်ခွဲအရွယ်သမီးလေးတစ်ယောက် တစ်နှစ်သုံးလအရွယ် သားလေးတစ်ယောက် ကျန်ရစ်ခဲ့ပါတယ်။
Wai Phyo Thein
အသက် ၂၅ နှစ်အရွယ်ရှိ ကိုဝေဖြိုးသိန်းဟာ မန္တလေးမြို့ ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ် မြရည်နန္ဒာရပ်ကွက်တွင် နေထိုင်တာဖြစ်ပြီး ၂၀၂၁ ခုနှစ် မတ်လ ၁၅ ရက်နေ့တွင် မန္တလေးမြို့ ၁၁၂ A လမ်း၊ ၅၄ လမ်းနှင့် ၅၅ လမ်းကြား၌ ရဲနှင့်စစ်တပ်၏ အကြမ်းဖက်ဖြိုခွင်းပစ်ခတ်မှုကြောင့် နောက်ကျောကို ကျည်ဆံထိမှန်ကာ ကျဆုံးခဲ့ရပါတယ်။
အသက် ၁၈ နှစ်အရွယ်ရှိ ကိုသူရကျော်ဟာ ၂၀၂၁ ခုနှစ် မတ်လ ၁၅ ရက်နေ့တွင် ပဲခူး၌ ရဲနှင့်စစ်တပ်၏ အကြမ်းဖက်ဖြိုခွင်းပစ်ခတ်မှုကြောင့် ကျည်ဆံထိမှန်ကာ ကျဆုံးခဲ့ရပါတယ်။
ကိုသူရကျော်ဟာ ပဲခူးမြို့ မဇင်းရပ်ကွက် ရေကျော်ပိုင်းတွင် နေထိုင်တာဖြစ်ပြီး ကျဆုံးသူ ကိုရွှေအရဲ့ ညီဝမ်းကွဲဖြစ်ပါတယ်။
အသက် ၂၁ နှစ်အရွယ်ရှိ ကိုသူရနိုင်ဟာ ပဲခူးတိုင်း ကမာနတ်ကျေးရွာတွင် နေထိုင်သူဖြစ်ပြီး ၂၀၂၁ ခုနှစ် မတ်လ ၁၄ ရက်နေ့တွင် ပဲခူး လိပ်ပြာကန်အနီး SML ရောဂါရှာဖွေရေးစင်တာအတွင်း အလုပ်လုပ်နေစဉ် ရဲနှင့်စစ်တပ်၏ အကြမ်းဖက်ပစ်ခတ်မှုကြောင့် ဦးခေါင်းကို ကျည်ဆံထိမှန်ကာ ကျဆုံးခဲ့ရပါတယ်။
အသက် ၃၈ နှစ်အရွယ်ရှိ ကိုဖိုးကျော်ဟာ ၂၀၂၁ ခုနှစ် မတ်လ ၁၄ ရက်နေ့တွင် အင်းစိန်၌ ရဲနှင့်စစ်တပ်၏ အကြမ်းဖက်ဖြိုခွင်းပစ်ခတ်မှုကြောင့် ဆီးခုံကို ကျည်ဆံထိမှန်ကာ ကျဆုံးခဲ့ရပါတယ်။
ကိုဖိုးကျော်ဟာ အင်းစိန်မြို့နယ် ကမ်းနားအနောက်ရပ်ကွက် နီလာလမ်းမှာ နေထိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။ ကျဆုံးပြီးနောက် ဇနီးဖြစ်သူနှင့် အသက် ၁၀ နှစ်၊ ၇ နှစ်နှင့် ၁ လသားအရွယ် စုစုပေါင်း ကလေး3ယောက် ကျန်ရစ်ခဲ့ပါတယ်။
အသက် ၂၂ နှစ်အရွယ်ရှိ ကိုရင်ထွေးဟာ ၂၀၂၁ ခုနှစ် မတ်လ ၁၄ ရက်နေ့တွင် လှိုင်သာယာ၌ ရဲနှင့်စစ်တပ်၏ အကြမ်းဖက်ဖြိုခွင်းပစ်ခတ်မှုကြောင့် ဦးခေါင်းကို ကျည်ဆံထိမှန်ကာ ကျဆုံးခဲ့ရပါတယ်။
ကိုရင်ထွေးဟာ တွန်းလှည်းနဲ့ ငါးရောင်းခြင်းကို လုပ်ကိုင်တာဖြစ်ပြီး ကျဆုံးချိန်မှာ ဇနီးဖြစ်သူနှင့် ခြောက်လသား ကလေးတစ်ယောက် ကျန်ရစ်ခဲ့ပါတယ်။
အသက် ၃၃ နှစ်အရွယ်ရှိ ကိုဘခက်ဟာ ၂၀၂၁ ခုနှစ် မတ်လ ၁၄ ရက်နေ့တွင် လှိုင်သာယာ၌ ရဲနှင့်စစ်တပ်၏ အကြမ်းဖက်ဖြိုခွင်းပစ်ခတ်မှုကြောင့် ကျည်ဆံထိမှန်ကာ ကျဆုံးခဲ့ရပါတယ်။
ကိုဘခက်ဟာ ညောင်တုန်းလမ်းမကြီး ၊ ၁၀ ရပ်ကွက် ၊ လှိုင်သာယာတွင် နေထိုင်တာဖြစ်ပြီး ကျဆုံးချိန်မှာ ဇနီးဖြစ်သူနှင့် ကလေးနှစ်ယောက် ကျန်ရစ်ခဲ့ပါတယ်။
အသက် ၅၂ နှစ်အရွယ်ရှိ ကိုဖိုးသက်ဟာ ၂၀၂၁ ခုနှစ် မတ်လ ၁၄ ရက်နေ့တွင် လှိုင်သာယာ၌ ရဲနှင့်စစ်တပ်၏ အကြမ်းဖက်ဖြိုခွင်းပစ်ခတ်မှုကြောင့် ကျည်ဆံထိမှန်ကာ ကျဆုံးခဲ့ရပါတယ်။
အသက် ၃၈ နှစ်အရွယ်ရှိ ကိုဝင်းရွှေဟာ ၂၀၂၁ ခုနှစ် မတ်လ ၁၄ ရက်နေ့တွင် လှိုင်သာယာ ၃ ထိပ် သပိတ်၌ ရဲနှင့်စစ်တပ်၏ အကြမ်းဖက်ဖြိုခွင်းပစ်ခတ်မှုကြောင့် ရင်ညွှန့်ကို ကျည်ဆံထိမှန်ကာ ကျဆုံးခဲ့ရပါတယ်။
ကိုဝင်းရွှေဟာ ကျောင်းကုန်းလမ်းမှာ နေထိုင်တာဖြစ်ပြီး ရုပ်အလောင်းကို မြောက်ဥက္ကလာ အအေးတိုက်မှာ ရှာတွေ့ခဲ့ပါတယ်။
Kyal Sin Hein
အသက် ၁၆ နှစ်အရွယ်ရှိ ကိုကြယ်စင်ဟိန်းဟာ ၂၀၂၁ ခုနှစ် မတ်လ ၁၄ ရက်နေ့တွင် လှိုင်သာယာ တံတားဖြူဆန္ဒပြပွဲအတွင်း ဒိုင်းကာအဖွဲ့မှာနေပြီး ကျည်ထိသူကိုကယ်ဆယ်ရင်း ရဲနှင့်စစ်တပ်၏ အကြမ်းဖက်ပစ်ခတ်ဖြိုခွဲမှုကြောင့် ဦးခေါင်းကို ကျည်ဆံထိမှန်ကာ ကျဆုံးခဲ့ရပါတယ်။
စစ်တပ်၏ ဆက်တိုက်ပစ်ခတ်မှုများကြောင့် အလောင်းကို ပြန်မသယ်နိုင်ခဲ့ဘဲ သဲအိတ်ဘေးမှာ ထားခဲ့ရပြီး စစ်သားများက သယ်ဆောင်သွားတဲ့အတွက် သွေးစွန်းနေတဲ့ ကျောပိုးအိတ်ကိုသာ ပြန်ရခဲ့ပါတယ်။ အလောင်းကို ပြန်မပေးတဲ့အတွက် အသုဘမဏ္ဍပ်လည်း မထိုးရဘဲ နောက်ဆုံးခရီကို မြေဆွမ်းသပိတ်သာ သွပ်ပေးခဲ့ရပါတယ်။
ကိုကြယ်စင်ဟိန်းဟာ ၉ တန်းကျောင်းသား ဖြစ်ပြီး လှိုင်သာယာ ၁၄ ရပ်ကွက် မေခလမ်းမှာ နေထိုင်ပါတယ်။ နွေရာသီ ကျောင်းပိတ်လျှင် ဆိုင်ကယ်ပြင်ဆိုင်မှာ အလုပ်ဝင်လုပ်ပြီး မိဘကို ကူညီကြောင်း သိရပါတယ်။ ၁၀ တန်းပြီးရင် နေမကောင်းတဲ့ သူ့အဖေကို အလုပ်နားခိုင်းပြီး အိမ်အတွက် စီးပွါးရှာကူမယ်လို့ ပြောလေ့ရှိပါတယ်။
အသက် ၁၇ နှစ်အရွယ်ရှိ ကိုဝေယံလင်းဟာ ၂၀၂၁ ခုနှစ် မတ်လ ၁၄ ရက်နေ့တွင် လှိုင်သာယာ၌ ရဲနှင့်စစ်တပ်၏ အကြမ်းဖက်ဖြိုခွင်းပစ်ခတ်မှုကြောင့် ကျည်ဆံထိမှန်ကာ ကျဆုံးခဲ့ရပါတယ်။
ကိုဝေယံလင်းဟာ လှိုင်သာယာမြို့နယ် ပင်လုံဈေး (13)ရပ်ကွက် ကြယ်တာယာလမ်းတွင် အိမ်ငှါးနေထိုင်တာဖြစ်ပြီး ကျန်ရစ်သူ မိသားစုမှာ ခက်ခဲကျပ်တည်းကြောင်း သိရပါတယ်။
အသက် ၂၂ နှစ်အရွယ်ရှိ ကိုအေးမင်းဟာ ၂၀၂၁ ခုနှစ် မတ်လ ၁၄ ရက်နေ့တွင် လှိုင်သာယာ ဆန္ဒပြပွဲ၌ ရဲနှင့်စစ်တပ်၏ အကြမ်းဖက်ဖြိုခွင်းပစ်ခတ်မှုကြောင့် ကျည်ဆံထိမှန်ကာ ကျဆုံးခဲ့ရပါတယ်။
အသက် ၄၉ နှစ်အရွယ်ရှိ ကိုသိန်းထွန်းဟာ ၂၀၂၁ ခုနှစ် မတ်လ ၁၄ ရက်နေ့တွင် လှိုင်သာယာသပိတ်၌ ရဲနှင့်စစ်တပ်၏ အကြမ်းဖက်ဖြိုခွင်းပစ်ခတ်မှုကြောင့် ကျည်ဆံထိမှန်ကာ ကျဆုံးခဲ့ရပါတယ်။
ကိုသိန်းထွန်းဟာ ရှင်စောပုလမ်း တစ်ထိပ် ၃ရပ်ကွက် လှိုင်သာယာမြို့နယ်တွင် နေထိုင်တာဖြစ်ပြီး ကျဆုံးချိန်မှာ ဇနီးဖြစ်သူနှင့် သားလေးတစ်ယောက် ကျန်ရစ်ခဲ့ပါတယ်။
Kaung Pyae Kyaw
အသက် ၂၂ နှစ်အရွယ်ရှိ ကိုကောင်းပြည့်ကျော်ဟာ ၂၀၂၁ ခုနှစ် မတ်လ ၁၄ ရက်နေ့တွင် လှိုင်မြို့နယ် သံလမ်း ညသပိတ်၌ ရဲနှင့်စစ်တပ်၏ အကြမ်းဖက်ပစ်ခတ်ဖြိုခွဲမှုကြောင့် ဦးခေါင်းကို ကျည်ဆံထိမှန်ကာ ကျဆုံးခဲ့ရပါတယ်။
ကိုကောင်းပြည့်ကျော်ဟာ သုခလမ်း၊ (၈) ရပ်ကွက်၊ လှိုင်မြို့နယ်တွင် နေထိုင်ပါတယ်။ မကျဆုံးခင်က "ငြိမ်နေရင် ပင့်ကူအိမ်တောင် ငြိလိမ့်မယ် ရုံးထွက်ရင် သံကြိုးတောင် ပြတ်နိုင်တယ်" "ကမ္ဘာမကြေဘူး" စသဖြင့် ခန္ဓာကိုယ်တွင် နွေဦးတော်လှန်ရေး တက်တူးများ ထိုးခဲ့ပါတယ်။
အသက် ၂၁ နှစ်အရွယ်ရှိ ကိုထက်ကို ခေါ် ထက်လင်းအောင်ဟာ ၂၀၂၁ ခုနှစ် မတ်လ ၁၄ ရက်နေ့တွင် ရန်ကုန်မြို့၊ ရွှေပြည်သာမြို့နယ် ဆန္ဒပြပွဲ၌ ရဲနှင့်စစ်တပ်၏ အကြမ်းဖက်ဖြိုခွင်းမှုကြောင့် ကျည်ဆံထိမှန်ကာ ကျဆုံးခဲ့ရပါတယ်။
ကိုထက်ကိုဟာ အမှတ် (285)၊ ရွှေတောင်လမ်း၊ ရွှေပြည်သာတွင် နေထိုင်ပါတယ်။ မတ်လ ၁၆ ရက်နေ့တွင် ရုပ်အလောင်းကို စစ်ဆေးရုံမှ သွားထုတ်ကာ ကျူချောင်သုသာန်တွင် သင်္ဂြုဟ်ခဲ့ပါတယ်။
အသက် ၂၃ နှစ်အရွယ်ရှိ ကိုကျော်ရဲအောင်ဟာ ၂၀၂၁ ခုနှစ် မတ်လ ၁၃ ရက်နေ့တွင် မြောက်ဒဂုံမြို့နယ် ပင်လုံညသပိတ်၌ ရဲနှင့်စစ်တပ်၏ အကြမ်းဖက်ဖြိုခွင်းမှုကြောင့် မျက်နှာကို ကျည်ဆံထိမှန်ပြီး ဦးခေါင်းပွင့်ကာ ကျဆုံးခဲ့ရပါတယ်။
ကိုကျော်ရဲအောင်ဟာ သုံးခွမြို့နယ် အမှတ် ၁ရပ်ကွက် ကျိုက်ဟုမ်းလမ်းတွင် နေထိုင်သော သုံးခွမြို့သားဖြစ်ပြီး ဒဂုံမြောက် (၃၇) ရပ်ကွက် ရွှေဂုံသီရိလမ်းရှိ ဆိုက်တစ်ခုတွင် အလုပ်ဆင်းနေသော အကြမ်းသမားဖြစ်ပါတယ်။ ကျဆုံးပြီးနောက် ဇနီးဖြစ်သူနှင့် (၃) နှစ်အရွယ် သားလေးတစ်ယောက် (၅) လအရွယ် သားလေးတစ်ယောက် ကျန်ရစ်ခဲ့ပါတယ်။
အသက် ၂၈ နှစ်အရွယ်ရှိ ကိုနိုင်ရဲကျော်ဟာ ၂၀၂၁ ခုနှစ် မတ်လ ၁၄ ရက်နေ့ ညပိုင်းတွင် မြောက်ဒဂုံ မဝတလမ်းဆုံ၌ ရဲနှင့်စစ်တပ်၏ အကြမ်းဖက်ဖြိုခွင်းမှုကြောင့် ရင်ညွန့်ကို ကျည်ဆံထိမှန်ကာ ကျဆုံးခဲ့ရပါတယ်။
ကိုနိုင်ရဲကျော်ဟာ ဒဂုံမြို့သစ် မြောက်ပိုင်း ၄၂ရပ်ကွက် မဟာဆွေလမ်းမှာ နေထိုင်တာဖြစ်ပြီး ကျဆုံးချိန်မှာ ဇနီးဖြစ်သူနှင့် သုံးနှစ်အရွယ် သားလေး ကျန်ရစ်ခဲ့ပါတယ်။
အသက် ၂၃ နှစ်အရွယ်ရှိ ကိုအောင်ကောင်းမိုးဟာ ၂၀၂၁ ခုနှစ် မတ်လ ၁၄ ရက်နေ့တွင် မြောက်ဒဂုံ ဆန္ဒပြပွဲ၌ ရဲနှင့်စစ်တပ်၏ အကြမ်းဖက်ဖြိုခွင်းမှုကြောင့် ဦးခေါင်းကို ကျည်ဆံထိမှန်ကာ ကျဆုံးခဲ့ရပါတယ်။
ကိုအောင်ကောင်းမိုးဟာ CB Bank ရုံးချုပ် Digital Marketing ဌာနမှ ဝန်ထမ်းတစ်ဦး ဖြစ်ပါတယ်။
အသက် ၂၂ နှစ်အရွယ်ရှိ ကိုဟိန်းစိုး ခေါ် ဖိုးသဲဟာ ၂၀၂၁ ခုနှစ် မတ်လ ၁၄ ရက်နေ့တွင် တောင်ဒဂုံမြို့နယ် စစ်အာဏာရှင်ဆန့်ကျင်ရေးဆန္ဒပြပွဲ၌ ရဲနှင့်စစ်တပ်၏ အကြမ်းဖက်ဖြိုခွင်းမှုကြောင့် ကျည်ဆံထိမှန်ကာ ကျဆုံးခဲ့ရပါတယ်။
ကိုဟိန်းစိုးဟာ လှည်းကူးမြို့နယ် နဘဲပင်ကျေးရွာသားဖြစ်ပြီး ရုပ်အလောင်းကို နဘဲပင်သုဿာန်မှာ သီးသန့်ဂူပြုလုပ်ခဲ့ပြီး ဂူသွင်းသင်္ဂြိုလ်ခဲ့ပါတယ်။
Nay Lin Htet
အသက် ၂၉ နှစ်အရွယ်ရှိ ကိုနေလင်းထက်ဟာ ၂၀၂၁ ခုနှစ် မတ်လ ၁၄ ရက်နေ့တွင် တောင်ဒဂုံမြို့နယ်၌ ရဲနှင့်စစ်တပ်၏ အကြမ်းဖက်ဖြိုခွင်းပစ်ခတ်မှုကြောင့် ကျည်ဆံထိမှန်ကာ ကျဆုံးခဲ့ရပါတယ်။
ကိုနေလင်းထက်ဟာ ခရမ်းမြို့နယ် ၊ ကမာကလူကျေးရွာဇာတိဖြစ်ပြီး တောင်ဒဂုံမြို့နယ်၊ အမှတ် (၅၄၅) ၊ ပုလဲကန်လမ်း ၊ (၆၅) ရပ်ကွက်တွင် နေထိုင်ပါတယ်။ ကျဆုံးချိန်မှာ ဇနီးဖြစ်သူနှင့် တစ်နှစ်အရွယ် ကလေး ကျန်ရစ်ခဲ့ပါတယ် ။
Min Min Htet
အသက် ၃၈ နှစ်အရွယ်ရှိ ကိုမင်းမင်းထက် ဟာ ၂၀၂၁ ခုနှစ် မတ်လ ၁၄ ရက်နေ့တွင် တောင်ဒဂုံမြို့နယ်၌ ရဲနှင့်စစ်တပ်၏ အကြမ်းဖက်ဖြိုခွင်းပစ်ခတ်မှုကြောင့် ကျည်ဆံထိမှန်ကာ ကျဆုံးခဲ့ရပါတယ်။
ကိုမင်းမင်းထက်ဟာ အမှတ် (၆၉၄) ၊ ဗြဟ္မစိုရ်လမ်း ၊ (၅၅) ရပ်ကွက်တွင် ဦးလေးဖြစ်သူနှင့် အတူနေထိုင်ပါတယ်။
အသက် ၃၅ နှစ်အရွယ်ရှိ ကိုကျော်ခင်ဟာ ၂၀၂၁ ခုနှစ် မတ်လ ၁၅ ရက်နေ့တွင် မကွေးတိုင်း အောင်လံမြို့ လမ်းမတော်လမ်း တရော်ကုန်းရပ် ရွှေပြောင်ပြောင်ဘုရား အနီး၌ ရဲနှင့်စစ်တပ်၏ အကြမ်းဖက်ပစ်ခတ်မှုကြောင့် ရင်ဘတ်တည့်တည့်ကို ကျည်ဆံထိမှန်ကာ ကျဆုံးခဲ့ရပါတယ်။
ကိုကျော်ခင်ဟာ လူထုမေတ္တာအပ်ချုပ်ဆိုင်တွင် လုပ်ကိုင်သူဖြစ်ပြီး တရော်ကုန်းရပ်ကွက်၊ အောင်လံမြို့၊ မကွေးတိုင်းဒေသကြီးတွင် နေထိုင်ပါတယ်။
Pann Myat Chel
အသက် ၂၀ နှစ်အရွယ်ရှိ မပန်းမြတ်ချယ် ခေါ် ဆိုမိုင်ယာဟာ ၂၀၂၁ ခုနှစ် မတ်လ ၁၅ ရက်နေ့တွင် မြင်းခြံမြို့ ဆန္ဒပြပွဲ၌ ရဲနှင့်စစ်တပ်၏ အကြမ်းဖက်ဖြိုခွင်းမှုကြောင့် ကျည်ဆံထိမှန်ကာ ကျဆုံးခဲ့ရပါတယ်။
မပန်းမြတ်ချယ်ဟာ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင် ရှဟီးဒီအမျိုးသမီးဖြစ်ပြီး မြင်းခြံသပိတ်စစ်ကြောင်း စကတည်းက ရှေ့ဆုံးကနေ ဒိုင်းကာအဖွဲ့မှာ ပါဝင်ပြီး တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တဲ့သူပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
Kyaw Zeyar Htun
အသက် ၁၇ နှစ်အရွယ်ရှိ မောင်ကျော်ဇေယျာထွန်း ဟာ ၂၀၂၁ ခုနှစ် မတ်လ ၁၄ ရက်နေ့တွင် ရွှေပြည်သာ အ.ထ .က (၁ )ကျောင်းရှေ့၌ ရဲနှင့်စစ်တပ်၏ အကြမ်းဖက်ဖြိုခွင်းမှုကြောင့် မျက်လုံးနဲ့ပေါင်ကို ကျည်ဆံထိမှန်ကာ ကျဆုံးခဲ့ရပါတယ်။
မောင်ကျော်ဇေယျာထွန်းဟာ မြင်းလှည်းမောင်းသူဖြစ်ပြီး ကျဆုံးချိန်မှာ အဖိုး၊ အဖွား၊ အမေ၊ ညီလေးနှင့် ညီမလေး ကျန်ရစ်ခဲ့ပါတယ်။
Zuu Wint Wah
အသက် ၁၅ နှစ်အရွယ်ရှိ မဇူးဝင့်ဝါဟာ ၂၀၂၁ ခုနှစ် မတ်လ ၁၄ ရက်နေ့တွင် တောင်ဒဂုံမြို့နယ် ဧရာဝဏ်လမ်းဆုံ၌ ရဲနှင့်စစ်တပ်၏ အကြမ်းဖက်ပစ်ခတ်မှုကြောင့် ကျည်ဆံထိမှန်ကာ ကျဆုံးခဲ့ရပါတယ်။
မဇူးဝင့်ဝါဟာ တောင်ဒဂုံ (၅၅) ရပ်ကွက်တွင် နေထိုင်သူဖြစ်ပြီး "သမီးသေသွားခဲ့ရင် မကယ်ပါနဲ့။ သမီးကိုထားပြီး နိုင်အောင်ကြိုးစားကြပါ။ ဒီတိုက်ပွဲအောင်ရင် သေပျော်ပါပြီ။ ကမ္ဘာမကြေဘူး" လို့ မကျဆုံးမှီက စာရေးသားထားခဲ့ပါတယ်။
မဇူးဝင့်ဝါဟာစစ်အာဏာသိမ်းမှုအား ဆန့်ကျင်ဆန္ဒပြပွဲများတွင် တောက်လျှောက်ပါဝင်ခဲ့ပြီး မတ်လဆန်း တွင် ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရဖူးကာ ပြန်လည်လွတ်မြောက်ခဲ့သည်မှာ တစ်ပတ်သာရှိသေးကြောင်း ဖခင်ဖြစ်သူက ပြောပါတယ်။ "ကျွန်တော်က အဖေတစ်ယောက်အနေနဲ့ ဂုဏ်ယူတယ်ဗျာ။ ဒါပေမယ့် တစ်သက်မကြေဘူး၊ သမီးက ပြောတယ် ပါပါးသေရင်မျက်ရည်မကျနဲ့တဲ့" ဟု ဆိုကာ ဝမ်းနည်းငိုကြွေးလျက်ရှိပါတယ်။
Khant Nyar Hein
အသက် ၁၇ နှစ်အရွယ်ရှိ မောင်ခန့်ညားဟိန်းဟာ ၂၀၂၁ ခုနှစ် မတ်လ ၁၄ ရက်နေ့တွင် ရန်ကုန် တာမွေမြို့နယ် သပိတ်ကို ရဲနှင့်စစ်တပ်၏ အကြမ်းဖက်ဖြိုခွင်းမှုကြောင့် ကျည်ဆံထိမှန်ကာ ကျဆုံးခဲ့ရပါတယ်။
မောင်ခန့်ညားဟိန်းဟာ ရန်ကုန်ဆေးတက္ကသိုလ် (၁) မှ Foundation Year ကျောင်းသားဖြစ်ပြီး မိဘက ပိုး​​မွေးသလို ​မွေးထားတဲ့ ဆရာဝန်လောင်းလေးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ "ပညာမတတ်တဲ့ကျွန်မက သားလေးကို စာတော်တဲ့ ထူးချွန်တဲ့သားကလေး ဖြစ်လာအောင် အစစအရာရာ ပံ့ပိုးပေးခဲ့ပေမယ့် သားလေးကိုဆုံးရှုံးလိုက်ရပြီ။ ကျွန်မ ကမ္ဘာလုံး၀မကြေဘူး” လို့ ခန့်ညားဟိန်း၏ မိခင်က ဝမ်းနည်းဆို့နစ်ကြေကွဲစွာ ပြောပါတယ်။
Min Wai Yan Mauk
အသက် ၁၉ နှစ်အရွယ်ရှိ မောင်မင်းဝေယံမောက်ဟာ ၂၀၂၁ ခုနှစ် မတ်လ ၁၄ ရက်နေ့တွင် ကြည့်မြင်တိုင် အိုးဘိုလမ်းသပိတ်၌ ရဲနှင့်စစ်တပ်၏ အကြမ်းဖက်ဖြိုခွင်းမှုကြောင့် နှလုံးသားတည့်တည့်ကို ကျည်ဆံထိမှန်ကာ ကျဆုံးခဲ့ရပါတယ်။
မောင်မင်းဝေယံမောက်ဟာ အ.ထ.က ၄ အလုံမှကျောင်းသားဟောင်းဖြစ်ပြီး ကြည့်မြင်တိုင်မြို့နယ် စလင်းလမ်း "အောင်သိန်း" သစ်ဆိုင်မှ တစ်ဦးတည်းသောသားဖြစ်ပါတယ်။
Kyaw Lin Htike
အသက် ၃၀ အရွယ်ရှိ ကိုကျော်လင်းထိုက်ဟာ ၂၀၂၁ ခုနှစ် မတ်လ ၁၄ ရက်နေ့တွင် ကချင်ပြည်နယ် မိုးညှင်းခရိုင် ဖားကန့်မြို့၌ ရဲနှင့်စစ်တပ်၏ အကြမ်းဖက်ဖြိုခွင်းမှုကြောင့် ဒိုင်းကာကိုင်ကာ ကာကွယ်ပေးရင်း ညာဘက်ရင်အုံးအထက်နားကို ကျည်ဆံထိမှန်ကာ ကျဆုံးခဲ့ရပါတယ်။
ကိုကျော်လင်းထိုက်ဟာ မိုးညှင်း GTC ကျောင်းသား​ဟောင်းဖြစ်​ပြီး မိဘများ ဆုံးပါးသွားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ မိုးကောင်းမြို့ အိုးတန်းရပ်ကွက် ဇာတိဖြစ်ပြီး လက်ရှိတွင် ဖားကန့်မြို့ ဆိပ်မူရပ်ကွက် (၄) မှာ နေထိုင်​ကြောင်း သိရပါတယ်။
Myo Thant Soe
အသက် ၂၃ နှစ်အရွယ်ရှိ ကိုမျိုးသန့်စိုးဟာ ၂၀၂၁ ခုနှစ် မတ်လ ၁၃ ရက်နေ့တွင် မန္တလေး မြို့ စိန်ပန်း ၄၁လမ်း၌ ရဲနှင့်စစ်တပ်၏ အကြမ်းဖက်ဖြိုခွင်းမှုကြောင့် မျက်လုံးကို ကျည်ဆံထိမှန်ကာ ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်ခြင်းခံရပြီး ပြင်ဦးလွင်စစ်ဆေးရုံမှာ ကျဆုံးခဲ့ရပါတယ်။
ကိုမျိုးသန့်စိုးဟာ တစ်ဦးတည်းသော သားဖြစ်ပြီး ၉၁ လမ်း နှင့် လမ်း ၄၀ ထောင့်၊ စိန်ပန်း၊ ရွာလယ်ရပ်တွင် မိဘနှစ်ပါးနှင့်အတူ နေထိုင်ပါတယ်။
အသက် ၄၃ နှစ်အရွယ်ရှိ ကိုဝင်း‌ဖြိုးအောင် ခေါ် ကြောင်လေးဟာ ၂၀၂၁ ခုနှစ် မတ်လ ၁၃ ရက်နေ့တွင် မကွေးတိုင်း ချောက်မြို့ အမှတ် ၁၅၊ ရတနာအိုင့်ရပ်၌ ရဲနှင့်စစ်တပ်၏ အကြမ်းဖက်ဖြိုခွင်းမှုကြောင့် ကျည်ဆံထိမှန်ခဲ့ပြီး ဆေးကုသမှုခံယူဖို့ ညောင်ဦးမြို့ကိုပို့ဆောင်စဉ် ကျဆုံးခဲ့ရပါတယ်။
ကိုဝင်း‌ဖြိုးအောင်ဟာ ကုန်တင်ကားကြီးမောင်းနှင်သူဖြစ်ပြီး အမှတ် ၆ နယ်မြေ၊ ရွှေသူဌေးရပ်ကွက် ချောက်မြို့တွင် နေထိုင်ပါတယ်။ ကျဆုံးချိန်မှာ ဇနီးဖြစ်သူနဲ့ ၁၀နှစ်အရွယ် သားလေး ကျန်ရစ်ခဲ့ပါတယ်။
Phay Thein Kyaw
အသက် ၃၄ နှစ်အရွယ်ရှိ ကိုဖေသိန်းကျော်ဟာ ၂၀၂၁ ခုနှစ် မတ်လ ၁၇ ရက်နေ့ မွန်းလွဲ ၃ နာရီခွဲတွင် ရန်ကုန်မြို့ လှိုင် ၁ ရပ်ကွက် ဘူတာရုံလမ်းထိပ်၌ ရဲနှင့်စစ်တပ်၏ အကြမ်းဖက်ပစ်ခတ်ဖြိုခွင်းမှုကြောင့် ဦးခေါင်းကို ကျည်ဆံထိမှန်ကာ ကျဆုံးခဲ့ရပါတယ်။
ကိုဖေသိန်းကျော်ဟာ အ.ထ.က(၃)ဒဂုံ (မြို့မ) ကျောင်းသားဟောင်းဖြစ်ပြီး အမှတ် ၁၉၈၊ သုခလမ်း လမ်း၅၀၊ အမက-၇ မျက်နှာချင်းဆိုင် ၅လွှာ၊ ၈ရပ်ကွက်၊ လှိုင်မြို့နယ်မှာ နေထိုင်ပါတယ်။ English ကို ကျွမ်းကျင်စွာပြောနိုင်တဲ့ ဘွဲ့ရပညာတတ်ဖြစ်ပြီး ကိုဗစ်ကာလတွင် ပန်းရံလုပ်ကာ မိခင်ကို လုပ်ကျွေးခဲ့ကြောင်း သိရပါတယ်။ တိုက်ပွဲမှာ ကျဆုံးသွားရင် အမျှမဝေဖို့ မိခင်ကို မှာကြားခဲ့ပြီး ကျဆုံးချိန်မှာ ရောဂါသည် မိခင်ဖြစ်သူ ပင်စင်ယူခါနီး ဆရာမတစ်ဦးတည်း ကျန်ရစ်ခဲ့ပါတယ်။
Phyo Kyaw Thu
အသက် ၂၈ နှစ်အရွယ်ရှိ ကိုဘေတားဟာ ၂၀၂၁ ခုနှစ် မတ်လ ၁၆ ရက်​နေ့ ည ၁၀ နာရီဝန်းကျင်တွင် ရန်ကုန် မင်္ဂလာ​တောင်ညွှန့်၌ ရဲနှင့်စစ်တပ်၏ အကြမ်းဖက်ပစ်ခတ်မှု​ကြောင့် ဝမ်းဗိုက်ကို ကျည်ဆံထိမှန်ကာ မတ်လ ၁၇ ရက်​နေ့ နံနက်အ​စောပိုင်းတွင် ကျဆုံးခဲ့ရပါတယ်။
Do Suan Kim
အသက် ၁၉ နှစ်အရွယ်ရှိ ကိုဒိုဆွမ်းကိမ်းဟာ ၂၀၂၁ ခုနှစ် မတ်လ ၁၇ ရက်နေ့တွင် ကလေးမြို့၊ တာဟန်းရပ်ကွက်၊ လက်ပံချောင်းလမ်းခွဲ၌ ရဲနှင့်စစ်တပ်၏ အကြမ်းဖက်ဖြိုခွင်းပစ်ခတ်မှုကြောင့် ဦးခေါင်းကို ကျည်ဆံထိမှန်ကာ ကျဆုံးခဲ့ရပါတယ်။
ကိုဒိုဆွမ်းကိမ်းဟာ ချင်းတိုင်းရင်းသားဖြစ်ပြီး တီးတိန်မြို့နယ် ထေးဇန်ကျေးရွာ ဇာတိဖြစ်ပါတယ်။ ထိုနေ့က သပိတ်သွားမမှောက်ဘဲ အိမ်ဆောက်ဖို့ မိခင်က ပြောခဲ့သော်လည်း "လွတ်လပ်ရေးမရရင် အလုပ်လုပ်လဲ ဘာထူးလဲ အိမ်သစ်တွေဆောက်လဲ ဘာထူးခြားလဲ" လို့ ပြန်ပြောခဲ့ပြီး ထွက်လာရာမှ ကျဆုံးခဲ့ရပါတယ်။
ရုပ်အလောင်းကို မတ် ၁၉ ရက်နေ့က ကလေးမြို့ စစ်ဆေးရုံ ရင်ခွဲရုံမှ ပြန်ရခဲ့ပြီးနောက် နေ့လည်ပိုင်းတွင် ထေးဇန်ရွာရှိ သုဿန်သို့ ပို့ဆောင်ကာ မြေမြုပ်သင်္ဂြိုဟ်ခဲ့ပါတယ်။
Zaw Min Oo
အသက် ၄၂ နှစ်အရွယ်ရှိ ဦးဇော်မင်းဦးဟာ ၂၀၂၁ ခုနှစ် မတ်လ ၁၅ ရက်နေ့တွင် မန္တလေးမြို့ ၆၂/၁၁၂ လမ်းထောင့်၌ ရဲနှင့်စစ်တပ်၏ အကြမ်းဖက်ပစ်ခတ်မှုကြောင့် ဦးခေါင်းကို ကျည်ဆံထိမှန်ကာ ကျဆုံးခဲ့ရပါတယ်။
ဦးဇော်မင်းဦးဟာ မန္တလေး (ဃ) သိုးခြံမီးရထားလိုင်းမှာ နေထိုင်ပါတယ်။ ဇနီးဖြစ်သူက ကွယ်လွန်သွားပြီဖြစ်ပြီး ကျဆုံးချိန်မှာ ကလေး ၂ ယောက် ကျန်ရစ်ခဲ့ပါတယ်။
Nanda Phyo Aung
အသက် ၂၂ နှစ်အရွယ်ရှိ ကိုနန္ဒဖြိုးအောင်ဟာ ၂၀၂၁ ခုနှစ် မတ်လ ၁၅ ရက်နေ့တွင် ဒဂုံဆိပ်ကမ်းမြို့နယ်၊ ယုဇနဥယျာဥ်မြို့တော်၊ ပုဏ္ဏမီလမ်းနှင့် ပိတောက်လမ်း A အနီး၌ ရဲနှင့်စစ်တပ်၏ အကြမ်းဖက်ဖြိုခွင်းမှုကြောင့် ဒိုင်းကာနေရင်း ခါးကို ကျည်ဆံထိမှန်ကာ သွေးထွက်လွန်ပြီး ကျဆုံးခဲ့ရပါတယ်။
ကိုနန္ဒဖြိုးအောင်ဟာ ကိုဗစ်စင်တာမှာ စေတနာ့ဝန်ထမ်းအဖြစ် ကူညီခဲ့သူ ပရဟိတသမားဖြစ်ပြီး တိုက် ၁၊ အခန်း (၃၀၃) ၉လမ်း A၊ ယုဇနဥယျာဉ်မြို့တော်မှာ နေထိုင်ပါတယ်။ ကျည်ထိမှန်ချိန်မှာ မကျဆုံးသေးဘဲ ရဲတပ်ဖွဲ့က ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားပြီးနောက်မှ သင်္ဃန်းကျွန်းစံပြဆေးရုံမှာ ပိုင်ရှင်မဲ့အလောင်းအဖြစ် ရှာတွေ့ခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
Khant Aung Phyo
အသက် ၁၉ နှစ်အရွယ်ရှိ ကိုခန့်အောင်ဖြိုးဟာ ၂၀၂၁ ခုနှစ် မတ်လ ၁၅ ရက်နေ့တွင် ဒဂုံဆိပ်ကမ်းမြို့နယ် ပုဏ္ဏမီမှတ်တိုင်အနီး၌ ရဲနှင့်စစ်တပ်၏ အကြမ်းဖက်ပစ်ခတ်မှုကြောင့် ဦးနှောက်ကို ကျည်ဆံထိမှန်ကာ ကျဆုံးခဲ့ရပါတယ်။
ကိုခန့်အောင်ဖြိုးဟာ Civil First year ကျောင်းသားဖြစ်ပြီး ရန်ကုန်တိုင်း၊ ဒဂုံဆိပ်ကမ်းမြို့နယ်၊ အမှတ် (၈၄) ရပ်ကွက်၊ စီဘလောက် (အင်ကြင်းလမ်း)မှာ နေထိုင်ပါတယ်။ ကျဆုံးချိန်မှာ မိခင်တစ်ဦးတည်း ကျန်ရစ်ခဲ့ပါတယ်။
အသက် ၁၇ နှစ်အရွယ်ရှိ ကိုအောင်မျိုးဇော်ဟာ မြင်းခြံမြို့ အမှတ် ၁၉ စွန်းလွန်းရပ်ကွက်တွင် နေထိုင်သူဖြစ်ပြီး ၂၀၂၁ ခုနှစ် မတ်လ ၁၅ ရက်နေ့တွင် မြင်းခြံမြို့ ဆန္ဒပြပွဲ၌ ရဲနှင့်စစ်တပ်၏ အကြမ်းဖက်ဖြိုခွင်းမှုကြောင့် ဘယ်ဘက်ရင်အုံကို ကျည်ဆံထိမှန်ကာ ကျဆုံးခဲ့ရပါတယ်။
Tin Tun Aung
အသက် ၁၉ နှစ်အရွယ်ရှိ ကိုတင်ထွန်းအောင်ဟာ မြင်းခြံမြို့ အမှတ် ၁၆ ရပ်ကွက်မှာ နေထိုင်သူဖြစ်ပြီး ၂၀၂၁ ခုနှစ် မတ်လ ၁၅ ရက်နေ့တွင် မြင်းခြံမြို့ ဆန္ဒပြပွဲ၌ ရဲနှင့်စစ်တပ်၏ အကြမ်းဖက်ဖြိုခွင်းမှုကြောင့် ဦးခေါင်းကို ကျည်ဆံထိမှန်ကာ ကျဆုံးခဲ့ရပါတယ်။
Aung Kyaw Zaw
အသက် ၂၇ နှစ်အရွယ်ရှိ ဦးအောင်ကျော်ဇောဟာ ၂၀၂၁ ခုနှစ် မတ်လ ၁၅ ရက်နေ့တွင် မြင်းခြံမြို့ ဆန္ဒပြပွဲ၌ ရဲနှင့်စစ်တပ်၏ အကြမ်းဖက်ဖြိုခွင်းမှုကြောင့် ကျည်ဆံထိမှန်ကာ ကျဆုံးခဲ့ရပါတယ်။
ဦးအောင်ကျော်ဇောဟာ CDM မှာ ပါဝင်နေတဲ့ အငယ်တန်းအင်ဂျင်နီယာ - ၃ မြို့ပြ ( JE ) ဖြစ်ပြီး မြင်းခြံမြို့ အမှတ် ၂ ရပ်ကွက်မှာ နေထိုင်ပါတယ်။
အသက် ၅၄ နှစ်အရွယ်ရှိ ဦးလှစိုးဟာ မြင်းခြံမြို့ အမှတ် ၂ ရပ်ကွက်မှာ နေထိုင်သူဖြစ်ပြီး ၂၀၂၁ ခုနှစ် မတ်လ ၁၅ ရက်နေ့တွင် မြင်းခြံမြို့ ဆန္ဒပြပွဲ၌ ရဲနှင့်စစ်တပ်၏ အကြမ်းဖက်ဖြိုခွင်းမှုကြောင့် ကျည်ဆံထိမှန်ကာ ကျဆုံးခဲ့ရပါတယ်။
Yan Myo Aung
အသက် ၁၇ နှစ်အရွယ်ရှိ ကိုရန်မျိုးအောင်ဟာ မြင်းခြံမြို့ အမှတ် ၁၉ ရပ်ကွက်မှာ နေထိုင်သူဖြစ်ပြီး ၂၀၂၁ ခုနှစ် မတ်လ ၁၅ ရက်နေ့တွင် မြင်းခြံမြို့ ဆန္ဒပြပွဲ၌ ရဲနှင့်စစ်တပ်၏ အကြမ်းဖက်ဖြိုခွင်းမှုကြောင့် ကျည်ဆံထိမှန်ကာ ကျဆုံးခဲ့ရပါတယ်။
အသက် ၃၅ နှစ်အရွယ်ရှိ ကိုဝဏ္ဏဌေးဟာ ၂၀၂၁ ခုနှစ် မတ်လ ၁၄ ရက်နေ့တွင် လှိုင်သာယာကို ကူညီဖို့ အင်းစိန်ဖော့ကန်စစ်ကြောင်းကနေ လိုက်ပါရင်း ရွာမရဲစခန်းအနီး၌ ရဲနှင့်စစ်တပ်၏ အကြမ်းဖက်ပစ်ခတ်မှုကြောင့် ဝမ်းဗိုက်ကို ကျည်ဆံထိမှန်ကာ ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီးတွင် ကျဆုံးခဲ့ရပါတယ်။
ကိုဝဏ္ဏဌေးဟာ အင်းစိန်မြို့နယ် စဉ့်ငူရပ်ကွက် နဝရတ်(၄)လမ်းတွင် နေထိုင်သူဖြစ်ပြီး ကျဆုံးချိန်မှာ ဇနီးဖြစ်သူနှင့် ၇ နှစ်အရွယ် သားလေး ကျန်ရစ်ခဲ့ပါတယ်။ မကွယ်လွန်ခင်ထိ လက် ၃ ချောင်းထောင်ကာ ဖိုက်တင်းဆိုပြီး တောင့်ခံထားခဲ့တာဖြစ်ပြီး ရုပ်အလောင်းကို မတ် ၁၅ ရက်နေ့က ရေဝေးသုသာန်သို့ ပို့ဆောင်သင်္ဂြိုဟ်ခဲ့ပါတယ်။
Saw Pyae Sone
အသက် ၂၂ နှစ်အရွယ်ရှိ ကိုစောပြည့်စုံဟာ ၂၀၂၁ ခုနှစ် မတ်လ ၁၄ ရက် ညတွင် အထက(၁) အင်းစိန် ကျောင်းဝန်းအနီး၌ ရဲနှင့်စစ်တပ်၏ အကြမ်းဖက်ပစ်ခတ်မှုကြောင့် ဦးခေါင်းကို ကျည်ဆံထိမှန်ကာ ကျဆုံးခဲ့ရပါတယ်။
ကိုစောလဲပွဲ ခေါ် ကိုစောပြည့်စုံဟာ ခရစ်ယာန်လူငယ်တစ်ဦးဖြစ်ပြီး ရှမ်းကုန်းလမ်းအမှတ်(၅၅) နံ့သာကုန်းရပ်ကွက် အင်းစိန်မြို့နယ်တွင် နေထိုင်သူ ဖြစ်ပါတယ်။ မိဘနှစ်ပါးက ဆုံးပါးသွားပြီဖြစ်၍ အဖွားဖြစ်သူနှင့် အတူနေထိုင်ပါတယ်။ ၁၅ ရက်နေ့မနက်တွင် အင်းစိန် အထက (၁) မှာ ရုပ်အလောင်း သွားယူခဲ့ရပြီး ၁၆ ရက်နေ့ နေ့လည်တွင် ထိန်ပင်သုသာန်မှာ ဂူသွင်းခဲ့ပါတယ်။
Chit Ko Ko Phyo
အသက် ၂၅ နှစ်အရွယ်ရှိ ကိုချစ်ကိုကိုဖြိုးဟာ ၂၀၂၁ ခုနှစ် မတ်လ ၁၄ ရက်နေ့တွင် သင်္ကန်းကျွန်းသပိတ်မှာ ဒိုင်းကာရင်း ရဲနှင့်စစ်တပ်၏ အကြမ်းဖက်ဖြိုခွင်းပစ်ခတ်မှုကြောင့် လည်ပင်းနှင့် လက်မောင်းကို ကျည်ဆံထိမှန်ကာ ကျဆုံးခဲ့ရပါတယ်။
ကိုချစ်ကိုကိုဖြိုးဟာ သင်္ကန်းကျွန်း တိုးချဲ့ ၃လမ်း အမှတ် ၈၅ ကကြီးရပ်ကွက်တွင် နေထိုင်ပြီး ကျဆုံးချိန်မှာ ဇနီးဖြစ်သူနှင့် ၂နှစ်အရွယ် သားလေး ကျန်ရစ်ခဲ့ပါတယ်။ နှစ်ဖက်မိဘများလည်း မရှိကြတော့ကြောင်း သိရပါတယ်။
Hla Min Oo
အသက် ၂၄ နှစ်အရွယ်ရှိ ကိုလှမင်းဦးဟာ ၂၀၂၁ ခုနှစ် မတ်လ ၁၄ ရက်နေ့တွင် သင်္ဃန်းကျွန်း၌ ရဲနှင့်စစ်တပ်၏ အကြမ်းဖက်ဖြိုခွင်းမှုကြောင့် ခြေထောက်နှင့် လည်ပင်းကို ကျည်ဆံထိမှန်ကာ ကျဆုံးခဲ့ရပါတယ်။
ကိုလှမင်းဦးဟာ ယာဉ်မောင်းဖြစ်ပြီး သဇင်ပန်းလမ်း၊ နှင်းဆီကုန်း "က"ရပ်ကွက်၊ သင်္ဃန်းကျွန်းတွင် နေထိုင်ပါတယ်။
Linn Linn Kyaw
အသက် ၄၃ နှစ်အရွယ်ရှိ ကိုလင်းလင်းကျော်ဟာ ၂၀၂၁ ခုနှစ် မတ်လ ၁၄ ရက်နေ့တွင် သင်္ဃန်းကျွန်း AKK အနီး၌ ရဲနှင့်စစ်တပ်၏ အကြမ်းဖက်ဖြိုခွင်းမှုကြောင့် ဝမ်းဗိုက်ကို ကျည်ဆံထိမှန်ကာ ကျဆုံးခဲ့ရပါတယ်။
ကိုလင်းလင်းကျော်အား ထိမှန်သွားသော ကျည်မှာ ပြင်းအားကောင်းသော ကျည်အမျိုးအစား ဖြစ်ပြီး ဝမ်းဗိုက်မှ ကျည်ဖောက်ထွက်ပြီးနောက် နောက်ထပ်လူနှစ်ယောက်ကို ထိမှန်သွားကြောင်း သိရပါတယ်။
ကိုလင်းလင်းကျော်ဟာ သင်္ဃန်းကျွန်း သမာဓိ ၂ လမ်းမှာ နေထိုင်တာဖြစ်ပြီး ကျဆုံးချိန်မှာ ဇနီးဖြစ်သူနှင့် ကလေးငယ်လေး ကျန်ရစ်ခဲ့ပါတယ်။
Hein Htet Dway
အသက် ၂၄ နှစ်အရွယ်ရှိ ကိုဟိန်းထက်ဒွေးဟာ ၂၀၂၁ ခုနှစ် မတ်လ ၁၄ ရက်နေ့တွင် သင်္ဃန်းကျွန်းဆန္ဒပြပွဲ၌ ရဲနှင့်စစ်တပ်၏ အကြမ်းဖက်ဖြိုခွင်းမှုကြောင့် ဘယ်ဘက်နံရိုးကို ကျည်ဆံထိမှန်ကာ ကျဆုံးခဲ့ရပါတယ်။
ကိုဟိန်းထက်ဒွေးဟာ သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ် ခြံအမှတ်၅.ဦးစံဖေလမ်း ဦးစံဖေရပ်ကွက် ဘာဘူခြံတွင် နေထိုင်သူ ဖြစ်ပါတယ်။
အသက် ၂၆ နှစ်အရွယ်ရှိ ကိုဝဏ္ဏအောင်ဟာ ၂၀၂၁ ခုနှစ် မတ်လ ၁၄ ရက်နေ့တွင် ဒဂုံမြို့သစ်မြောက်ပိုင်းမြို့နယ် မဝတလမ်းဆုံ၌ ရဲတပ်ဖွဲ့၏ အကြမ်းဖက်ပစ်ခတ်မှုကြောင့် ဝမ်းဗိုက်ကို ကျည်ဆံထိမှန်ကာ မတ်လ ၁၅ ရက် မနက်အစောပိုင်းမှာ ကျဆုံးခဲ့ရပါတယ်။
ကိုဝဏ္ဏအောင်ဟာ ဒဂုံမြို့သစ်မြောက်ပိုင်းမြို့နယ်၊ (၃၆) ရပ်ကွက်၊ မန်းလေးလမ်းမှာ နေထိုင်တာဖြစ်ပြီး ကျဆုံးချိန်မှာ ဇနီးဖြစ်သူနှင့် သုံးနှစ်အရွယ် သားလေး ကျန်ရစ်ခဲ့ပါတယ်။
Yan Naing Htun
အသက် ၂၆ နှစ်အရွယ်ရှိ ကိုရန်နိုင်ထွန်း ခေါ် ကိုရဲလေးဟာ ၂၀၂၁ ခုနှစ် မတ်လ ၁၄ ရက်နေ့တွင် လှိုင်သာယာသပိတ်ကို ရဲနှင့်စစ်တပ်၏ အကြမ်းဖက်ပစ်ခတ်ဖြိုခွဲမှုကြောင့် ကျည်ဆံထိမှန်ကာ ကျဆုံးခဲ့ရပါတယ်။
ကိုရန်နိုင်ထွန်းဟာ လှိုင်သာယာ 12 သမမှတ်တိုင်၊ 11 ရပ်ကွက်၊ ခိုင်သဇင်လမ်းတွင် နေထိုင်ပြီး ကျဆုံးချိန်မှာ ဇနီးဖြစ်သူနှင့် ကလေးတစ်ယောက် ကျန်ရစ်ခဲ့ပါတယ်။ ရုပ်အလောင်းကို မတ် ၁၆ ရက်နေ့က ထိန်ပင်သုဿာန်သို့ ပို့ဆောင်သင်္ဂြုဟ်ခဲ့ပါတယ်။
Soe Htay Aung
အသက် ၂၄ နှစ်အရွယ်ရှိ ကိုစိုးဌေးအောင်ဟာ ၂၀၂၁ ခုနှစ် မတ်လ ၁၄ ရက်နေ့တွင် လှိုင်သာယာ၌ ရဲနှင့်စစ်တပ်၏ အကြမ်းဖက်ဖြိုခွင်းပစ်ခတ်မှုကြောင့် ကျည်ဆံထိမှန်ကာ ကျဆုံးခဲ့ရပါတယ်။
အသက် ၃၀ နှစ်အရွယ်ရှိ ကိုဝေဖြိုးအောင်ဟာ ၂၀၂၁ ခုနှစ် မတ်လ ၁၄ ရက်နေ့တွင် လှိုင်သာယာမြို့နယ်၌ ရဲနှင့်စစ်တပ်၏ အကြမ်းဖက်ဖြိုခွင်းမှုကြောင့် လည်ပင်းကို ကျည်ဆံထိမှန်ကာ ကျဆုံးခဲ့ရပါတယ်။
ကိုဝေဖြိုးအောင်ဟာ လှိုင်သာယာမီးခွက်စျေး အဖြူရောင်သုခအလင်း အသင်းသားဖြစ်ပြီး ဦးထုပ်မှာ နာမည် သွေးအမျိူးအစား အရေးပေါ်ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ် အပြည့်အစုံရေးကာ တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တဲ့သူ ဖြစ်ပါတယ်။
Phyo Zaw Linn
အသက် ၃၅ နှစ်အရွယ်ရှိ ဦးဖြိုးဇော်လင်းဟာ ၂၀၂၁ ခုနှစ် မတ်လ ၁၄ ရက်နေ့တွင် ရွှေပြည်သာမြို့နယ်၌ ရဲနှင့်စစ်တပ်၏ အကြမ်းဖက်ဖြိုခွင်းမှုကြောင့် ညာဘတ်ရင်အုံကို ကျည်ဆံထိမှန်ကာ ကျဆုံးခဲ့ရပါတယ်။
ဦးဖြိုးဇော်လင်းဟာ ဆိုင်ကယ်ကယ်ရီ ဆွဲသူဖြစ်ပြီး လိပ်စာက အမှတ် (၆၅၇) ၁၃ရပ်ကွက် မန္တလေးလမ်းသွယ်(ပန်းခြံ၇) ရွှေပြည်သာ ဖြစ်ကါတယ်။ ကျဆုံးချိန်မှာ မိဘနှစ်ပါး၊ ဇနီးနှင့် သားလေးတစ်ယောက် ကျန်ရစ်ခဲ့ပါတယ်။
San Htay Aung
အသက် ၂၉ နှစ်အရွယ်ရှိ ကိုစန်းဌေးအောင်ဟာ ၂၀၂၁ ခုနှစ် မတ်လ ၁၄ ရက်နေ့တွင် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ မြောက်ဥက္ကလာပမြို့နယ်၊ နွယ်သာဂီသပိတ်၌ ရဲနှင့်စစ်တပ်၏ အကြမ်းဖက်ဖြိုခွင်းပစ်ခတ်မှုကြောင့် ပေါင်ကို ကျည်ဆံထိမှန်ကာ ကျဆုံးခဲ့ရပါတယ်။
ကိုစန်းဌေးအောင်ဟာ ဒဂုံမြို့သစ်(မြောက်ပိုင်း)မြို့နယ်၊ ကက(၂.၃.၃) မေယု(၁)လမ်းရှိ ကျူးကျော်အိမ်တွင် နေထိုင်သူဖြစ်ပါတယ်။
Han Htet Aung
အသက် ၂၂ နှစ်အရွယ်ရှိ ကိုဟန်ထက်အောင်ဟာ ၂၀၂၁ ခုနှစ် မတ်လ ၁၄ ရက်နေ့တွင် မြောက်ဥက္ကလာ၌ ရဲနှင့်စစ်တပ်၏ အကြမ်းဖက်ဖြိုခွင်းမှုကြောင့် ဗိုက်ကို ကျည်ဆံထိမှန်ကာ ကျဆုံးခဲ့ရပါတယ်။
မောင်ဟန်ထက်အောင်ဟာ ဒဂုံတက္ကသိုလ်မှ မြန်မာစာအဝေးသင် တတိယနှစ်ကျောင်းသားဖြစ်ပါတယ်။
Kyaw Win Ko
အသက် ၂၈ နှစ်အရွယ်ရှိ ကိုကျော်ဝင်းကိုဟာ ၂၀၂၁ ခုနှစ် မတ်လ ၁၄ ရက်နေ့တွင် မြောက်ဒဂုံ မဝတ လမ်းဆုံ၌ ရဲနှင့်စစ်တပ်၏ အကြမ်းဖက်ဖြိုခွင်းမှုကြောင့် ဦးခေါင်းကို ကျည်ဆံထိမှန်ကာ ကျဆုံးခဲ့ရပါတယ်။
ကိုကျော်ဝင်းကိုဟာ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ဒဂုံမြို့သစ် (အရှေ့ပိုင်း) မြို့နယ်၊ (၇) ရပ်ကွက်၊ ရာဇာဓိရာဇ်လမ်း၊ အမှတ် (၆၃-က) တွင် နေထိုင်ပြီး ကျဆုံးချိန်မှာ မိဘနှစ်ပါးနှင့် အစ်မနှစ်ယောက် ကျန်ရစ်ခဲ့ပါတယ်။
Min Khant Soe
အသက် ၁၉ နှစ်အရွယ်ရှိ ကိုမင်းခန့်စိုးဟာ ၂၀၂၁ ခုနှစ် မတ်လ ၁၄ ရက်နေ့ ညနေ ၆ နာရီခန့်တွင် ရန်ကုန်တိုင်း တောင်ဥက္ကလာမြို့နယ် မေတ္တာလမ်း အမျိုးသမီးဆေးရုံရှေ့၌ ရဲနှင့်စစ်တပ်၏ အကြမ်းဖက်ဖြိုခွင်းမှုကြောင့် ကျည်ဆံထိမှန်ကာ ကျဆုံးခဲ့ရပါတယ်။
ကိုမင်းခန့်စိုးဟာ အရှေ့ဒဂုံမှာ နေထိုင်တာဖြစ်ပြီး "တောင်ဥက္ကလာ လူအင်အားနည်းတယ် အမေ၊ သားသွားပြီး အားဖြည့်ချင်တယ်" လို့ပြောပြီး အိမ်မှ ထွက်လာကာ တောင်ဥက္ကလာ အမှတ်895ခ မိဂသီ ၁၈လမ်း ၁၂ရပ်ကွက်ရှိ အဒေါ်အိမ်မှာ လာရောက်နေထိုင်သူ ဖြစ်ပါတယ်။
Ye Myo Htut
အသက် ၃၈ နှစ်အရွယ်ရှိ ကိုရဲမျိုးထွဋ်ဟာ ၂၀၂၁ ခုနှစ် မတ်လ ၁၄ ရက်နေ့တွင် တောင်ဒဂုံမြို့နယ် အောင်ချမ်းသာ ၁ လမ်း ၇၀ ရပ်ကွက် ဧရာဝဏ်ထိပ်၌ ရဲနှင့်စစ်တပ်၏ အကြမ်းဖက်ဖြိုခွင်းမှုကြောင့် ကျည်ဆံထိမှန်ပြီး လက်မောင်းမှ ကိုယ်ကို ဖောက်ထွက်ကာ ကျဆုံးခဲ့ရပါတယ်။
ကိုရဲမျိုးထွဋ်ဟာ အမှတ်(၄၅၉)၊ အောင်ချမ်းသာ (၁)လမ်း၊ (၇၀)ရပ်ကွက်၊ တောင်ဒဂုံတွင် နေထိုင်ပါတယ်။
အသက် ၃၆ နှစ်အရွယ်ရှိ ဒေါ်တင်တင်ဝင်း ခေါ် ဒေါ်စန်သီးဟာ ၂၀၂၁ ခုနှစ် မတ်လ ၁၄ ရက်နေ့တွင် ပဲခူးဘူတာ၌ ရဲနှင့်စစ်တပ်၏ အကြမ်းဖက်ပစ်ခတ်မှုကြောင့် ကျည်ဆံထိမှန်ကာ မြောင်းထဲကန်ချခံရပြီး ကျဆုံးခဲ့ရပါတယ်။
ဒေါ်တင်တင်ဝင်းဟာ အဝတ်လျှော်လုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ပြီး ကျွန်းသာယာရပ်ကွက်၊ ငွေစန္ဒာလမ်း (ဘဲတန်း)၊ Tamil ဘုရားကျောင်းအနီး၊ ပဲခူးမြို့မှာ နေထိုင်ပါတယ်။ ကျဆုံးချိန်မှာ သားသမီး (၃) ယောက်ဟာ ခိုကိုးရာမဲ့စွာ ကျန်ရစ်ခဲ့ပါတယ်။
Htet Naing Shein
အသက် ၁၇ နှစ်အရွယ်ရှိ ကိုထက်နိုင်ရှိန်းဟာ ၂၀၂၁ ခုနှစ် မတ်လ ၁၄ ရက်နေ့တွင် ပဲခူးမြို့၊ မှော်ကန်(၁၉)လမ်း၌ ရဲနှင့်စစ်တပ်၏ အကြမ်းဖက်ဖြိုခွင်းမှုကြောင့် ဘယ်ဘက်ရင်အုံကို ကျည်ဆံထိမှန်ကာ ကျဆုံးခဲ့ရပါတယ်။
ကိုထက်နိုင်ရှိန်းဟာ ပွင့်ဖြူ စိုက်ပျိုးရေးသိပ္ပံကျောင်းဆင်း ဖြစ်ပြီး မကွေးတိုင်း ပွင့်ဖြူမြို့နယ် ကုလားဟောင်းရွာတွင် နေထိုင်ပါတယ်။
Hla Min Thu
အသက် ၂၅ နှစ်အရွယ်ရှိ ကိုလှမင်းသူဟာ ၂၀၂၁ ခုနှစ် မတ်လ ၁၃ ရက်နေ့တွင် ရန်ကုန်တိုင်း တွံတေးမြို့နယ်၌ ရဲနှင့်စစ်တပ်၏ အကြမ်းဖက်ဖြိုခွင်းမှုကြောင့် ကျည်ဆံထိမှန်ကာ ကျဆုံးခဲ့ရပါတယ်။
ကိုလှမင်းသူဟာ တွံတေးမြို့ ရှမ်းစုတွင် နေထိုင်တာဖြစ်ပြီး ကျဆုံးချိန်မှာ ဇနီးဖြစ်သူနှင့် သမီးငယ်လေး ကျန်ရစ်ခဲ့ပါတယ်။
Han Min Htun
အသက် ၂၄ နှစ်အရွယ်ရှိ ကိုဟန်မင်းထွန်းဟာ ၂၀၂၁ ခုနှစ် မတ်လ ၁၃ ရက်နေ့တွင် ရန်ကုန်တိုင်း တွံတေးမြို့နယ်၌ ရဲနှင့်စစ်တပ်၏ အကြမ်းဖက်ပစ်ခတ်မှုကြောင့် ကျည်ဆံထိမှန်ကာ ကျဆုံးခဲ့ရပါတယ်။
ကိုဟန်မင်းထွန်းဟာ သာဓု ၄ လမ်း အိုးဖိုရှေ့တွင် နေထိုင်တာဖြစ်ပြီး ကျဆုံးချိန်မှာ ဇနီးဖြစ်သူနှင့် သမီးငယ်လေး ကျန်ရစ်ခဲ့ပါတယ်။
Htoo Mon Naing
အသက် ၃၁ နှစ်အရွယ်ရှိ ကိုထူးမွန်နိုင် ခေါ် ထူးလေးဟာ ၂၀၂၁ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၈ ရက်နေ့တွင် ရန်ကုန်မြို့ လှည်းတန်း၌ ရဲနှင့်စစ်တပ်၏ အကြမ်းဖက်ဖြိုခွင်းမှုကြောင့် ရှေ့တန်းမှကာကွယ်ပေးရင်း လည်ပင်းကို ကျည်ဆံထိမှန်ကာ မတ်လ ၁၃ ရက်နေ့တွင် ကျဆုံးခဲ့ရပါတယ်။
ကိုထူးမွန်နိုင်ဟာ သထုံမြို့၊ နန်းခဲရပ်ကွက်၊ ဆရာမဲကုန်းလမ်းဇာတိဖြစ်ပြီး Official Liverpool Supporters Club Myanmar (OLSC Myanmar) ​၏ အဖွဲ့ဝင်နှင့် Myanmar Reds Team Player တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။
Saw Yan Naing
အသက် ၃၇ နှစ်အရွယ်ရှိ ကိုစောရန်နိုင်ဟာ ၂၀၂၁ ခုနှစ် မတ်လ ၁၃ ရက်နေ့တွင် 36×89 လမ်း၌ ရဲနှင့်စစ်တပ်၏ အကြမ်းဖက်ဖြိုခွင်းမှုကြောင့် ကျည်ဆံထိမှန်ကာ ကျဆုံးခဲ့ရပါတယ်။
ကိုစောရန်နိုင်ဟာ 28လမ်း 87×88ကြား မမသိုင်းဓမ္မာရုံအနီးတွင် မိခင်ဖြစ်သူနှင့်အတူ နေထိုင်ပါတယ်။
Myo Naing Linn
အသက် ၃၉နှစ်အရွယ် ကိုမျိုးနိုင်လင်း ခေါ် ကိုဖိုးလင်းဟာ ၂၀၂၁ ခုနှစ် မတ်လ ၃ ရက်နေ့တွင် မန္တလေးမြို့ ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ် ၈၄လမ်းနှင့် လမ်း ၃၀ ထောင့်၌ ရဲနှင့်စစ်သားများ၏ အကြမ်းဖက်ပစ်ခတ်မှုများကြောင့် ဆန္ဒပြသူများကို ကာကွယ်ပေးရင်း ရင်ညွန့်ကို သေနတ်ထိမှန်ကာ ကျဆုံးခဲ့ရပါတယ်။
ကိုမျိုးနိုင်လင်းဟာ မန္တလေးမြို့ နန်းရှေ့ ၁၅လမ်းအနီး အိုးအိမ်တိုက်တန်းတွင် မိသားစုနှင့်အတူ နေထိုင်ပါတယ်။ ကျဆုံးချိန်မှာ ဇနီးဖြစ်သူနှင့်အတူ အသက်(၄)နှစ်နှင့် အသက်(၁)နှစ်အရွယ် သားလေးနှစ်ယောက် ကျန်ရစ်ခဲ့ပါတယ်။ ဇနီးဖြစ်သူဟာ CDM မှာ ပါဝင်လှုပ်ရှားနေတဲ့ နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းတစ်ဦးဖြစ်ပြီး ကျန်ရစ်သူမိသားစုဟာ အခက်အခဲတွေ့နေရကြောင်း သိရပါတယ်။
အသက် ၃၀ အရွယ်ရှိ ကိုတင်ထွဋ်ဟိန်းဟာ ၂၀၂၁ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀ ရက် ည ၁၁ နာရီခွဲခန့်တွင် ရန်ကုန်တိုင်း၊ ရွှေပြည်သာမြို့နယ်၊ တ/ ၁၅ ရပ်ကွက်၌ ညဖက်ရပ်ကွက်လုံခြုံရေး ကင်းစောင့်နေစဉ် ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များ၏ အကြမ်းဖက်ပစ်ခတ်မှုကြောင့် ဦးခေါင်းကို ကျည်ဆန်ထိမှန်ကာ ပွဲချင်းပြီး သေဆုံးခဲ့ရပါတယ်။
ကိုတင်ထွဋ်ဟိန်းဟာ စစ်ကောင်စီလက်ထက် အကြမ်းဖက်မှုများကြောင့် ကျဆုံးခဲ့ရသူများအနက် ရန်ကုန်တွင် ပထမဆုံး ကျဆုံးခဲ့သူဖြစ်ပြီး ရန်ကုန်တိုင်း၊ ရွှေပြည်သာမြို့နယ်၊ တ/ ၁၅ ရပ်ကွက်မှာ နေထိုင်ပါတယ်။ သူဟာ ကျပန်းလုပ်ကိုင်သူတစ်ဦးဖြစ်ပြီး ကျဆုံးချိန်မှာ ဇနီးဖြစ်သူနှင့် ၅ နှစ်အရွယ် သားလေးကျန်ရစ်ခဲ့ပါတယ်။
အသက် ၁၉ နှစ်အရွယ်ရှိ မောင်ထက်အောင်ဟာ ၂၀၂၁ ခုနှစ် မတ်လ ၃ ရက်နေ့ ညနေ ၃ နာရီခန့်တွင် မြောက်ဥက္ကလာမြို့နယ် သုဓမ္မာလမ်းမကြီး ကျောက်ရေတွင်းတံတားအဆင်း၌ ရဲနှင့်စစ်တပ်၏ အကြမ်းဖက်ပစ်ခတ်မှုကြောင့် ရင်ဘက်ကို ကျည်ဆန်ထိမှန်ပြီး သေဆုံးခဲ့ပါတယ်။
မောင်ထက်အောင်ဟာ ရေသန့်လုပ်သားဖြစ်ပြီး အာသာဝတီ (၅)လမ်းထိပ် အပေါင်ဆိုင်ဘေး (၂)ရပ်ကွက် မြောက်ဥက္ကလာပမြို့နယ်တွင်နေထိုင်ပါတယ်။ ကျဆုံးချိန်မှာ ဇနီးဖြစ်သူနှင့် လေးလအရွယ် သားငယ်လေး ကျန်ရစ်ခဲ့ပါတယ်။
အသက် ၂၃ နှစ်အရွယ်ရှိ ကိုဟိန်းထွဋ်အောင်ဟာ ၂၀၂၁ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၈ ရက်နေ့တွင် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်၊ လေးထောင့်ကန်လမ်းမကြီးပေါ်ရှိ ဘဝမြင့်မှတ်တိုင်အနီး၌ သပိတ်စစ်ကြောင်း ပစ်ခတ်ဖြိုခွင်းခံရစဉ် ကျည်ဆံထိမှန်ပြီး လည်ပင်းထုတ်ချင်း ပေါက်သေနတ်ဒဏ်ရာဖြင့် ကျဆုံးသွားခဲ့ရပါတယ်။
ကိုဟိန်းထွဋ်အောင်ဟာ အထည်ချုပ်စက်ရုံ၀န်ထမ်းတစ်ဦးဖြစ်ပြီး တောင်ဒဂုံမြို့နယ်၊ ၇၁ရပ်ကွက်၊ကနောင်မင်းသားကြီး ၁လမ်း၊ အမှတ် ၂၄၈၆ (က) တွင် နေထိုင်ပါတယ်။ ကျဆုံးချိန်မှာ ဇနီးဖြစ်သူက ကိုယ်၀န် ၃လ ဖြင့် ကျန်ရစ်ခဲ့ပါတယ်။
အသက် ၂၆ နှစ်အရွယ်ရှိ ကိုရာဇာအောင်ဟာ ၂၀၂၁ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၀ ရက်နေ့တွင် မန္တလေးမြို့၊ မဟာအောင်မြေမြို့နယ်၊ ကမ်းနားလမ်း၌ ရဲနဲ့ စစ်တပ်ရဲ့ အကြမ်းဖက်ဖြိုခွဲမှုကြောင့် ဒူးခေါင်းတွင် ကျည်မှန်ကာ ဒဏ်ရာများရရှိခဲ့ပြီး ဆေးကုသမှုမခံရဘဲ ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရပါတယ်။ ဖမ်းဆီးခံပြီးနောက် လေးရက်မြောက်နေ့ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၄ ညနေတွင် ကျဆုံးသွားခဲ့ရပါတယ်။
ကိုရာဇာအောင်ဟာ ပန်းရံဆရာဖြစ်ပြီး အရှေ့ပတ္တရပ်ကွက်၊ မဟာအောင်မြေမြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးတွင် နေထိုင်ပါတယ်။ ကျဆုံးချိန်မှာ မိဘနှစ်ပါး၊ ဇနီးနှင့် သမီးတစ်ယောက် ကျန်ရစ်ခဲ့ပြီး မိခင်မှာ လေတစ်ခြမ်းဖြတ်နေကြောင်း သိရပါတယ်။
Zin Lin Htet
အသက် ၂၀ အရွယ်ရှိ မောင်ဇင်လင်းထက်ဟာ ၂၀၂၁ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၈ ရက်နေ့တွင် ရန်ကုန်မြို့ လှည်းတန်းလမ်း၌ စစ်တပ်၏ အကြမ်းဖက်ပစ်ခတ်မှုကြောင့် ရှေ့တန်းမှနေ၍ သစ်သားဒိုင်းကို အကာအကွယ်ပြုပေးရင်း ဦးခေါင်းထုတ်ချင်းပေါက် အပစ်ခံရပြီး မျက်လုံးတစ်လုံးကျွတ်ထွက်ကာ နေရာတွင် ကျဆုံးသွားခဲ့ရပါတယ်။
မောင်ဇင်လင်းထက်ဟာ ကျိုက်ထိုမြို့နယ်၊ ကွင်းကလေးကျေးရွာအုပ်စု၊ အင်းဝကျေးရွာဇာတိဖြစ်ပြီး မိဘနှစ်ပါးအား လုပ်ကျွေးရန် ရန်ကုန်တိုင်း လှိုင်သာယာမြို့နယ်တွင် အဆောင်နေရင်း အလုပ်လာရောက် လုပ်ကိုင်နေသူဖြစ်ပါတယ်။ ထို့နောက် မောင်ဇင်လင်းထက်၏ ရုပ်အလောင်းကို ကျိုက်ထိုသို့ ပြန်လည်သယ်ဆောင်ခဲ့ကာ မိသားစု၀င်များ၏ ဆန္ဒအရ သေဆုံးသူ၏ ကျွတ်ထွက်သွားသော မျက်လုံးနေရာတွင် မျက်စိအတုအစားထိုး၍ သဂြိုဟ်ခဲ့ကြပါတယ်။ မောင်ဇင်လင်းထက်ဟာ မွေးချင်းသုံး‌ယောက်အနက် အငယ်ဆုံးဖြစ်ပြီး ကျဆုံးချိန်မှာ မိဘ ၂ပါး နှင့် အကို ၂ ယောက်ကျန်ရစ်ခဲ့ပါတယ်။
Kyi Min Hlaing
အသက် ၁၈ နှစ်အရွယ် မောင်ကြည်လှိုင်မင်း ခေါ် ခေါင်းကြီးဟာ ၂၀၂၁ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၈ ရက်နေ့တွင် ပဲခူးမြို့၊ ဘူတာကုန်းကျော်တံတားနဲ့ မြစ်ကူးတံတားအနီး၌ စစ်အာဏာရှင်ကို ဆန့်ကျင်ဆန္ဒပြရင်း ဦးခေါင်းကို ကျည်ဆံထိမှန်ပြီး ကျဆုံးသွားခဲ့ရပါတယ်။
မောင်ကြည်လှိုင်မင်းဟာ အမှတ်၃၇၈ မဇင်း ၁လမ်း၊အိုးလေးစုရပ်ကွက်၊ ပဲခူးတိုင်း‌ဒေသကြီးတွင် မိဘနှစ်ပါးနှင့်အတူ နေထိုင်ပြီး "တို့ဗမာ အစည်းအရုံး"ဝင် "သခင် လှကြိုင်"၏ ​မြစ်​တော်စပ်သူ ဟု သိရှိရပါတယ်။
Tin Nwae Yi
အသက် ၅၉ နှစ်အရွယ်ရှိ ဆရာမဒေါ်တင်နွဲ့ရီဟာ ၂၀၂၁ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၈ ရက်နေ့ နံနက် ၈:၃၅ ခန့် အချိန်တွင် ကြည့်မြင်တိုင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ပညာရေးမှူးရုံးရှေ့ အောက်ကြည့်မြင်တိုင်လမ်းပေါ်၌ ပညာရေး သပိတ်စစ်ကြောင်း စတင်ရန် စုဝေးနေစဥ် ရဲတပ်ဖွဲ့၏ ဖြိုခွင်းမှုကြောင့် လက်မောင်းကို ရာဘာကျည်ထိမှန်ကာ နှလုံးရောဂါဖောက်ပြီး ကျဆုံးသွားခဲ့ရပါတယ်။
ဆရာဒေါ်တင်နွဲ့ရီဟာ မင်းဘူးလမ်း၊ အမှတ် ၉ရပ်ကွက်၊ လှိုင်သာယာ (အနောက်ပိုင်း)မြို့နယ်တွင် နေထိုင်ပြီး လှိုင်သာယာမြို့နယ် အမှတ်(၁၀) အလယ်တန်း‌ကျောင်းတွင် တာဝန်ထမ်း‌ဆောင်လျက်ရှိပါတယ်။ ကျဆုံးချိန်မှာ သားသမီးနှစ်ယောက် ကျန်ရစ်ခဲ့ကြောင်း သိရပါတယ်။
အသက် ၂၆ နှစ်အရွယ် ကိုဇွဲထက်စိုးဟာ ၂၀၂၁ ခုနှစ် မတ်လ ၃ ရက်နေ့ မြောက်ဥက္ကလာအဝိုင်း ဆန္ဒပြပွဲတွင် သူငယ်ချင်းဖြစ်သူ ခြေထောက် သေနတ်ကျည်ထိမှန်သွားတာကို ကူညီကယ်ဆယ်ရင်း ဦးခေါင်းကို သေနတ်အပစ်ခံရပြီး ကျဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်။
ကိုဇွဲထက်စိုးဟာ မြောက်ဥက္ကလာပ ကျူးကျော်ရပ်ကွက်မှာ နေထိုင်ပြီး ကျဆုံးချိန်မှာအဘွားဖြစ်သူ၊ ဇနီးဖြစ်သူနှင့် ၄ နှစ် ၃ လအရွယ် သမီးလေး ကျန်ရစ်ခဲ့ပါတယ်။
အသက် ၁၆ နှစ်အရွယ် မောင်နေမျိုးအောင် ခေါ် မောင်ကုလားဟာ ၂၀၂၁ ခုနှစ် မတ်လ ၃ ရက်နေ့တွင် ပြည်ကြီးတံခွန်မြို့နယ် (ဃ)ရပ်ကွက်၊ ၆၂လမ်းနှင့် ၁၁၇ (ကျန်စစ်သား)လမ်းထောင့်၌ စစ်တပ်၏ ပစ်ခတ်မှုကြောင့် ဝဲဘက်ရင်အုံကို ကျည်အစစ်ထိမှန်ကာ သွေးထွက်လွန်ပြီး သေဆုံးသွားခဲ့ရပါတယ်။
မောင်ကုလားလေးဟာ ညီအကိုသုံးယောက်ထဲမှာ အငယ်ဆုံးဖြစ်ပြီး သူ တစ်နှစ်သားအရွယ်မှာ မိဘများကွယ်လွန်သွားခဲ့ပါတယ်။ သူဟာ အဖွားဖြစ်သူနှင့်အတူ ဘ/၂ အကွက်ဆိပ်၊ (ဃ) ရက်ကွက်၊ ပြည်ကြီးတံခွန်မြို့နယ်၊ ၁၁၆ A ၅၈လမ်းအတွင်း ကျူးရပ်ကွက်မှာ နေထိုင်ပြီး အဖွားကို လုပ်ကျွေးပြုစုနေတဲ့ မြေးလိမ္မာလေးလို့ သိရပါတယ်။
Zin Myo Thu
အသက် ၂၁ နှစ်အရွယ်ရှိ ကိုဇင်မျိုးသူ ခေါ် အဗ်ဒွရ်ရရှီးဒ်ဟာ ၂၀၂၁ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၈ ရက်နေ့တွင် မော်လမြိုင်မြို့ မုန့်တီကုန်းရပ်၌ သပိတ်စစ်ကြောင်း ဖြိုခွင်းခံရစဉ် ဦးခေါင်းတည့်တည့် ချိန်ရွယ်ပစ်ခတ်ခံရမှုကြောင့် ဦးနှောက်ပွင့်ထွက်ကာ နေရာတွင်ပင် ကျဆုံးခဲ့ရပါတယ်။
​ကိုဇင်မျိုးသူဟာ တစ်ဦးတည်းသောသားဖြစ်ပြီး မိခင်ဖြစ်သူနှင့်အတူ အိမ်အမှတ် ၄၄ ဇင်ယောလမ်းထိပ် မော်လမြိုင်မြို့တွင် နေထိုင်ပါတယ်။ သူဟာ လက်လုပ်လက်စားသမားမို့ ဆင်းရဲချို့တဲ့ကြောင်း သိရပါတယ်။
အသက် ၃၈ နှစ်အရွယ်ရှိ ကိုကြည်စိုးဟာ ၂၀၂၁ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၀ ရက်နေ့တွင် မန္တလေးမြို့၊ မဟာအောင်မြေမြို့နယ်၊ ၄၁ လမ်း ညစျေးကို ဆွမ်းလောင်းဖို့အတွက် စျေးသွားဝယ်ရင်း အကြမ်းဖက်နှ်ိမ်နင်းမှုတွေကို ဖုန်းဖြင့်ဓာတ်ပုံရိုက်နေစဉ် အရိုက်နှက်ခံရပြီး ဒဏ်ရာများစွာနဲ့ ကျဆုံးသွားခဲ့ရပါတယ်။
ကိုကြည်စိုးဟာ မြရည်နန္ဒာ တန်ဖိုးနည်း/တန်ဖိုးမျှတအိမ်ရာ၊ မန္တလေးမြို့တွင် နေထိုင်ပြီး ကျဆုံးချိန်မှာ ဇနီးနဲ့ သားလေးတစ်ယောက် ကျန်ရစ်ခဲ့ပါတယ်။
အသက် ၃၆ နှစ် အရွယ်ရှိ ကိုသန်းဝင်း ခေါ် ဂျွန်မာခမ်ဟာ ၂၀၂၁ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၈ ရက်နေ့တွင် ထားဝယ်မြို့ စျေးတောင်ဘက်လမ်းနှင့် ဗိုလ်ချုပ်စျေးထောင့်အနီး၌ ဆန္ဒပြနေစဉ် ရဲတပ်ဖွဲ့၏ ပစ်ခတ်နှိမ်နှင်းမှုကြောင့် ဝမ်းဗိုက်ကို ကျည်ထိမှန်ပြီး ဗိုက်ပွင့်ထွက်ကာ ဒဏ်ရာဖြင့် လဲကျနေစဉ် ရဲတပ်ဖွဲ့မှ ချီမသယ်ဆောင်သွားပြီး ထားဝယ်ရဲစခန်းချုပ်တွင် ကျဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်။
ကိုသန်းဝင်းဟာ တနင်္သာရီတိုင်း ထားဝယ်မြို့ ဇော်ကလေးလမ်း ကရပ်ပြင်မြောက်ဘက်တွင် မိဘနှစ်ပါးနှင့်အတူ နေထိုင်ပြီး ကျပန်းအလုပ် လုပ်ကိုင်သူဖြစ်ပါတယ်။ ရုပ်အလောင်းကို မတ်လ ၁ ရက်နေ့ နေ့လည်ပိုင်းတွင် တပ်မတော်ဆေးရုံ၌ မိသားစုက သွားရောက်ထုတ်ယူ၍ သင်္ဂြိုဟ်ခဲ့ပါတယ်။
အသက် ၃၇ နှစ်အရွယ်ရှိ ကိုသက်နိုင်ဝင်းဟာ ၂၀၂၁ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၀ ရက်နေ့တွင် မန္တလေးမြို့၊ မဟာအောင်မြေမြို့နယ်၊ ကမ်းနားလမ်း ဆန္ဒပြပွဲအတွင်း ၀မ်းဗိုက်ကို သေနတ်ကျည်ထိမှန်ပြီး ကျဆုံးသွားခဲ့ရပါတယ်။
ကိုသက်နိုင်ဝင်းဟာ သာမန်လုပ်သားတဦးဖြစ်ပြီး 42လမ်း, 90 E, မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးတွင် နေထိုင်ပါတယ်။ ကျဆုံးချိန်မှာ ဇနီးဖြစ်သူနှင့် သားလေးကျန်ရစ်ခဲ့ပြီး မန္တလေးမြို့ခံအချို့က ကိုသက်နိုင်ဝင်း၏ ဆန္ဒကို ဖြည့်ဆည်းတဲ့အနေနဲ့ သားဖြစ်သူကို ရှင်ပြုပေးမည်ဟု သိရပါတယ်။
အသက် ၁၆ နှစ်အရွယ်ရှိ မောင်သီဟဇော် ခေါ် နောင်နောင်ဟာ ၂၀၂၁ ခုနှစ် မတ်လ ၂ ရက်နေ့ ညနေ ၅နာရီခွဲခန့် အချိန်တွင် ဆတ်သွားကျေးရွာအနီး၊ တောစိမ်းကျေးရွာထိပ် ရန်ကုန် - မန္တလေး အမှတ်(၁) လမ်းမဘေး၌ “စစ်အာဏာရှင်အလိုမရှိ” လို့ ကြွေးကြော်နေစဉ် စစ်သားများရောက်ရှိလာပြီး သေနတ်နဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တဲ့အတွက် ပေါင်တွင် ကျည်ဆံထိမှန်ဒဏ်ရာရကာ ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရပြီးနောက် ယင်းဒဏ်ရာဖြင့်ပင် သေဆုံးခဲ့ရပါတယ်။
မောင်သီဟဇော်ဟာ မကွေးတိုင်း၊တောင်တွင်းကြီးမြို့နယ်၊ ဆတ်သွားရွာ (၅) ရပ်ကွက်တွင် မိသားစုနှင့်အတူ နေထိုင်သူဖြစ်ပြီး သူ၏ ရုပ်အလောင်းကို ပြန်လည်ရယူရန်အတွက် မိသားစုနှင့် နာရေးကူညီမှုကား လွှတ်ပေးဖို့ စစ်တပ်ဘက်က ပြော‌ကြောင်း မိသားစုနှင့်နီးစပ်သော အသိုင်းအဝိုင်းမှတစ်ဆင့် သိရပါတယ်။
Mg Mg Oo
အသက် ၄၁ နှစ်အရွယ်ရှိ ဦးမောင်မောင်ဦးဟာ ၂၀၂၁ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၈ ရက်နေ့တွင် ကုတင် (၃၀၀) ဆေးရုံထဲရှိ ဆရာဝန်၊ ဆရာမများအား ပိတ်ဆို့ထားသည့် သတင်းကြားပြီး ဆိုင်ကယ်နဲ့ အပြေးလာဝန်းရံစဉ် မန္တလေးမြို့ ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ် ၄၁လမ်း၊ ၆၄လမ်းနှင့် ၆၅လမ်းကြား၌ ရဲနှင့်စစ်သားများ၏ ပစ်ခတ်မှုကြောင့် ဆိုင်ကယ်စီးဦးထုပ်ကို ကျည်ဆံဖောက်ကာ ဦးနှောက်ပွင့်၍ နေရာတွင်ပင် ကျဆုံးခဲ့ရပါတယ်။
ဦးမောင်မောင်ဦးဟာ မန္တလေးတောင်ခြေရှိ ရွှေမန်းတောင်ဂေါက်ကွင်းတွင် ဂေါက်အိတ်ထမ်းအဖြစ် လုပ်ကိုင်ခဲ့ကာ ရွှေမန်းတံခွန် Golf အိတ်ထမ်း Carry အလုပ်သမား အဖွဲ့အစည်း ခေါင်းဆောင်ဖြစ်ပါတယ်။ ကိုဗစ်ကာလ ဂေါက်ကွင်းနားချိန်တွင် ဆိုင်ကယ်ကယ်ရီဆွဲနေသူဖြစ်ပြီး အရှေ့ဘက်ကွက်သစ်၊ နွယ်နီကျေးရွာ၊ ပုသိမ်ကြီးမြို့နယ်တွင် နေထိုင်ပါတယ်။ ကျဆုံးချိန်တွင် မိခင်၊ ဇနီး၊ အသက်(၇)နှစ်အရွယ် သားလေးနှင့် အသက်(၁)နှစ်ခွဲ နို့စို့အရွယ် သမီးလေး ကျန်ရစ်ခဲ့ပါတယ်။
Kyaw Htet Khaung
အသက် ၂၈ နှစ်အရွယ်ရှိ ကိုကျော်ထက်ခေါင် ခေါ် ကိုကုလားလေးဟာ ၂၀၂၁ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၈ ရက်နေ့တွင် မန္တလေးမြို့၊ ၆၈ လမ်း ၃၄×၃၅ လမ်းကြား၌ ဆန္ဒထုတ်ဖော်နေစဉ် စစ်သားနဲ့ ရဲများ၏ ပစ်ခတ်မှုကြောင့် ရင်ဘတ်ကို ကျည်ဆံထိမှန်ပြီး ကျဆုံးခဲ့ရပါတယ်။
ကိုကျော်ထက်ခေါင်ဟာ ဆိုင်ကယ်ဝပ်ရှော့လုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်သူဖြစ်ပြီး မန္တလေးမြို့၊ ၈၇လမ်း၊ ၄၀-၄၁လမ်းကြား၊ မဟာအောင်မြေ ကားကြီးကွင်း ၊အခန်း D3 တွင် နေထိုင်ပါတယ်။ ကျဆုံးချိန်မှာ မိခင်၊ ဇနီးနှင့် အသက်(၇)နှစ်အရွယ်သားလေး ကျန်ရစ်ခဲ့ပါတယ်။
အသက် ၂၃ နှစ်အရွယ်ရှိ ကိုမိုးအောင်ဟာ ၂၀၂၁ခုနှစ် မတ်လ ၃ ရက်နေ့တွင် မုံရွာမြို့ ပြည်​ထောင်စုလမ်း၊ ဘုရားနီဘုရားအနီး၌ ဆန္ဒပြလူထုအား ရဲနှင့်စစ်တပ်မှ ပစ်ခတ်ဖြိုခွင်းမှုကြောင့် ပေါင်ကို ကျည်ဆံထိမှန်ပြီး ကျဆုံးခဲ့ရပါတယ်။
ကိုမိုးအောင်ဟာ ကျူရှင်ဆရာဖြစ်ပြီး မုံရွာမြို့၊ မြဝတီရပ်၊ ပညာမြေအဆောင်နားတွင် နေထိုင်ပါတယ်။ ယခင်က မုံရွာမြို့ဟိုတယ်လုပ်ငန်းဌာန (MHPA) မှ ဝန်ထမ်းဖြစ်ပါတယ်။
အသက် ၂၅ နှစ် အရွယ် မကျော့နန္ဒာအောင်ဟာ ၂၀၂၁ ခုနှစ် မတ်လ ၃ ရက်နေ့တွင် မုံရွာမြို့ ပြည်​ထောင်စုလမ်း၊ ဘုရားနီဘုရားအနီး၌ ဆန္ဒပြလူထုအား ရဲနှင့်စစ်တပ်မှ ပစ်ခတ်ဖြိုခွင်းမှုကြောင့် ဦးခေါင်းကို သေနတ်ထိမှန်ကာ နောက်စေ့ပွင့်ပြီး ကျဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်။
မကျော့နန္ဒာအောင်ဟာ ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ် ဘွဲ့ရတစ်ဦးဖြစ်ပြီး မုံရွာမြို့၊ မြဝတီရပ်မှာ နေထိုင်ပါတယ်။
အသက် ၁၇ နှစ် အရွယ်ရှိ မောင်မင်းခန့်ကျော် ခေါ် ဖိုးသဲဟာ ၂၀၂၁ ခုနှစ် မတ်လ ၃ ရက်နေ့တွင် မုံရွာမြို့ ပြည်​ထောင်စုလမ်း၊ ဘုရားနီဘုရားအနီး၌ ဆန္ဒပြလူထုအား ရဲနှင့်စစ်တပ်မှ ပစ်ခတ်ဖြိုခွင်းမှုကြောင့် ကျည်ဆံထိမှန်ကာ ကျဆုံးခဲ့ရပါတယ်။
မောင်မင်းခန့်ကျော်ဟာ ဂရုဏာမြင်းမိုရ်အသင်းတွင် လူမူကယ်ဆယ်ရေးကူညီသူဖြစ်ပြီး မုံရွာမြို့၊ နန္ဒဝန်ရပ်တွင် နေထိုင်ပါတယ်။
အသက် ၂၀ နှစ် အရွယ်ရှိ မောင်ဇော်သိန်း​အောင်ဟာ ၂၀၂၁ ခုနှစ် မတ်လ ၃ ရက်နေ့တွင် မုံရွာမြို့ ပြည်​ထောင်စုလမ်း၊ ဘုရားနီဘုရားအနီး၌ ဆန္ဒပြလူထုအား ရဲနှင့်စစ်တပ်မှ ပစ်ခတ်ဖြိုခွင်းမှုကြောင့် ဦးခေါင်းကို ကျည်ထိမှန်ကာ ကျဆုံးခဲ့ရပါတယ်။
မောင်ဇော်သိန်း​အောင်ဟာ ဒုတိယနှစ် တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားဖြစ်ပြီး မုံရွာမြို့၊ ထန်းတောရပ်တွင် နေထိုင်ပါတယ်။
Myint Myint Zin
အသက် ၃၆ နှစ် အရွယ် ဆရာမဒေါ်မြင့်မြင့်ဇင် ခေါ် ကြည်လင်အေးဟာ ၂၀၂၁ ခုနှစ် မတ်လ ၃ ရက်နေ့တွင် မုံရွာမြို့ ပြည်​ထောင်စုလမ်း၊ ဘုရားနီဘုရားအနီး၌ ဆန္ဒပြလူထုအား ရဲနှင့်စစ်တပ်မှ ပစ်ခတ်ဖြိုခွင်းမှုကြောင့် ရင်ဝတည့်တည့်ကို ကျည်ဆံထိမှန်ပြီး ကျဆုံးခဲ့ရပါတယ်။
ဒေါ်မြင့်မြင့်ဇင်ဟာ ကျောင်းဆရာမအပြင်ကဗျာဆရာမလည်း ဖြစ်ပြီး မုံရွာမြို့နယ် အောင်ချမ်းသာရပ်တွင် နေထိုင်ပါတယ်။ အခင်းဖြစ်ပွါးတဲ့နေ့မှာ သူမလက်ဖျံတွင် ခန္ဓာကိုယ်အား လှူဒါန်းကြောင်း ရေးသားခဲ့ပါတယ်။
အသက် ၃၂ အရွယ်ရှိ အပု ခေါ် ဒေစီ ဟာ ၂၀၂၁ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၈ ရက်နေ့ ညနေ ၅နာရီခွဲ ခန့်တွင် မန္တလေးမြို့၊ ၃၅ လမ်းနှင့် ၇၆ လမ်းထောင့်၌ သူ့သားအတွက်မုန့်သွားဝယ်ရာကနေ လူတွေပြေးလာတာကို ရပ်ကြည့်နေရင်း အရပ်ဝတ်နဲ့ လူတစ်ဦး စစ်သား သို့မဟုတ် ရဲမှ သေနတ်ဖြင့်ပစ်ခတ်မှုကြောင့် ဦးခေါင်းကို ကျည်ထိမှန်ပြီး နေရာမှာတင် သေဆုံးခဲ့ရပါတယ်။
ဒေစီဟာ ခင်ပွန်းနှင့်ကွဲကွာနေသူဖြစ်ပြီး အသက် (၆) နှစ်အရွယ် သားလေးနဲ့အတူ မန္တလေးမြို့ ၃၅×၇၆လမ်းထောင့် အမြောက်တန်းရပ်ကွက်​မှာ နေထိုင်ပါတယ်။
အသက် ၂၁ နှစ်အရွယ်ရှိ ကိုမင်းဦးဟာ ၂၀၂၁ ခုနှစ် မတ်လ ၃ ရက်နေ့တွင် မြောက်ဥက္ကလာမြို့နယ် သုဓမ္မာလမ်းမကြီး ကျောက်ရေတွင်းတံတားအဆင်း၌ ရဲနှင့်စစ်တပ်၏ အကြမ်းဖက်ပစ်ခတ်မှုကြောင့် ဆီးခုံကို ကျည်ဆန်ထိမှန်ပြီး ကျဆုံးခဲ့ရပါတယ်။
ကိုမင်းဦးဟာ ကျပန်းအလုပ်သမား​လေးဖြစ်ပြီး မြောက်ဥက္ကလာ ၂ ရပ်ကွက် မာဃ အပိုင်း၃ ဍအိမ်အမှတ် ဃ/၁၂ တွင် နေထိုင်ပါတယ်။ ကျဆုံးချိန်မှာ ဇနီးဖြစ်သူဟာ ကိုယ်ဝန် နှစ်လလွယ်ထားရတာ ဖြစ်ပါတယ်။
အသက် ၃၉ နှစ်အရွယ်ရှိ ကိုဗညားအောင်ဟာ ၂၀၂၁ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၈ ရက်နေ့တွင် ထားဝယ်မြို့၊ ဥတ္တတားကြီးလမ်းဆုံနဲ့ ကရပ်ပြင်လမ်းဆုံ၌ ဆန္ဒပြရင်း ရဲတပ်ဖွဲ့၏ အကြမ်းဖက်ဖြိုခွင်းမှုကြောင့် ရင်ဘတ်အနောက်မှအရှေ့သို့ ကျည်ဆံဖောက်ဝင်ပြီး ကျဆုံးခဲ့ရပါတယ်။
ကိုဗညားအောင်ဟာ ပန်းရံဆရာဖြစ်ပြီး လောင်းလုံမြို့နယ် ကျောက်ဆင်ရွာ (ခ) ရပ်ကွက်၊ မာဃလမ်းမှာ နေထိုင်ပါတယ်။ ကျဆုံးချိန်တွင် ဇနီးဖြစ်သူနှင့် ကလေး၂ယောက် ကျန်ရစ်ခဲ့ပါတယ်။
အသက် ၃၅ နှစ် အရွယ် ကိုဖေသန်း ခေါ် နော်ငို ဟာ ၂၀၂၁ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၈ ရက်နေ့တွင် ထားဝယ်မြို့ စျေးတောင်ဘက်လမ်းနှင့် ဗိုလ်ချုပ်လမ်းထောင့်အနီး၌ ဆန္ဒပြနေစဉ် ရဲတပ်ဖွဲ့၏ ပစ်ခတ်နှိမ်နှင်းမှုကြောင့် ကျည်ထိမှန်ပြီး ကျဆုံးသွားခဲ့ရပါတယ်။
ကိုဖေသန်းဟာ ရေဖြူမြို့နယ် ပုဂေါဇွန်းရွာတွင် နေထိုင်ပြီး ကျဆုံးချိန်မှာ မိဘနှစ်ပါးနှင့်အတူစိတ်ကျန်းမာရေးချို့တဲ့သော အစ်ကိုတစ်ယောက် ကျန်ရစ်ခဲ့ပါတယ်။
အသက် ၃၃ နှစ်အရွယ်ရှိ ကိုလွင်လွင်ဦး ခေါ် အော့ဂီးဟာ ၂၀၂၁ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၈ ရက်နေ့တွင် ထားဝယ်မြို့၊ ဥတ္တတားကြီးလမ်းဆုံနဲ့ ကရပ်ပြင်လမ်းဆုံ၌ ရဲတပ်ဖွဲ့၏ အကြမ်းဖက်ဖြိုခွင်းမှုကြောင့် သပိတ်စစ်ကြောင်း တပ်ဦးမှ ဒိုင်းကာပေးရင်း ကျည်ဆံက လက်လုပ်အကာကိုဖြတ်ကာ ရင်ညွန့်ကို ဝင်ရောက်ခဲ့ပြီး ကျဆုံးခဲ့ရပါတယ်။
ကိုလွင်လွင်ဦးဟာ အိမ်ဆေးသုတ်လုပ်ငန်းနှင့် စျေးရောင်းခြင်းကို လုပ်ကိုင်ပြီး အိမ်အမှတ် ၃၆၇၊ ဆန်းချီလမ်း၊ ပုံကျွန်းရပ်၊ ထားဝယ်မြို့တွင် နေထိုင်ပါတယ်။ ကျဆုံးပြီးနောက် ဇနီးသည်နှင့် သမီးငယ်လေး ကျန်ရစ်ခဲ့ပါတယ်။
အသက် ၂၅ နှစ် အရွယ်ရှိ ကိုဝေယံ ခေါ် ကိုကံချွန်ဟာ ၂၀၂၁ ခုနှစ် မတ်လ ၃ ရက်နေ့တွင် မုံရွာမြို့ ပြည်​ထောင်စုလမ်း၊ ဘုရားနီဘုရားအနီး၌ ဆန္ဒပြလူထုအား ရဲနှင့်စစ်တပ်မှ ပစ်ခတ်ဖြိုခွင်းမှုကြောင့် ဦးခေါင်းကို ကျည်ဆံထိမှန်ကာ ကျဆုံးခဲ့ရပါတယ်။
အသက် ၁၈ နှစ်အရွယ် မောင်ဇင်မျိုးမောင်ဟာ ၂၀၂၁ ခုနှစ် မတ်လ ၂ ရက်နေ့တွင် ကလေးမြို့၌ ဆန္ဒပြပြည်သူလူထုအား ရဲတပ်ဖွဲ့နှင့် စစ်တပ်၏ ပစ်ခတ်ဖြိုခွင်းမှုကြောင့် အဆုတ်ထဲ ကျည်ဝင်သွားကာ ဆေးကုသရန် မန္တလေးမြို့သို့ အသွား မတ်လ ၃ ရက်နေ့ညမှာ ကျဆုံးခဲ့ရပါတယ်။
အသက် ၅၈ နှစ်အရွယ်ရှိ ဦးခင်မောင်လတ်ဟာ ၂၀၂၁ ခုနှစ် မတ်လ ၆ရက်နေ့ ညပိုင်းတွင် ရန်ကုန်မြို့လယ်၊ ပန်းဘဲတန်းမြို့နယ် လမ်း ၃၀ အလယ်လမ်းရှိ နေအိမ်၌ စစ်တပ်နှင့်ရဲ၏ အကြမ်းဖက် ဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးခံရပြီးနောက် ၆ ဆင့်ကွဲ အသံဗုံးကြောင့် နှလုံးထိခိုက်ပြီး ကျဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်။
ဦးခင်မောင်လတ်ဟာ ပန်းဘဲတန်း NLD ၇ ရပ်ကွက် ရပ်ကျေးဥက္ကဋ္ဌဖြစ်ပြီး ၂၀၂၀ရွေးကောက်ပွဲဝင် ပန်းပဲတန်းမြို့နယ် ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးစည်သူမောင်ရဲ့ ရွေးကောက်ပွဲကိုယ်စားလှယ်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။
အသက် ၃၀ အရွယ်ရှိ ကိုတူးအောင် ခေါ် မာတူးဟာ ၂၀၂၁ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ ၈ ရက်နေ့တွင် မန္တလေးမြို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လမ်း (၃၈လမ်း/ ၇၃/၇၈လမ်းကြား) ၌ ဆိုင်ကယ်ကို ကားဖြင့် တိုက်ခံရ အကြမ်းဖက်ခံရပြီး သေဆုံးသွားခဲ့ရပါတယ်။
အသက် ၃၉ နှစ်အရွယ်ရှိ ကိုကေဇဝင်း ခေါ် ချမ်းသာဆွေဟာ ၂၀၂၁ ခုနှစ် မတ်လ ၃ ရက်နေ့တွင် မုံရွာမြို့ ပြည်​ထောင်စုလမ်း၊ ဘုရားနီဘုရားအနီး၌ ဆန္ဒပြလူထုအား ရဲနှင့်စစ်တပ်မှ ပစ်ခတ်ဖြိုခွင်းမှုကြောင့် ကျည်ဆံထိမှန်ကာ ကျဆုံးခဲ့ရပါတယ်။
ကိုကေဇဝင်းဟာ ကဗျာဆရာတစ်ဦးဖြစ်ပြီး စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ယင်းမာပင်ခရိုင် ဆားလင်းကြီးမြို့နယ် လက်ပန်တောင်းရွာတွင် နေထိုင်ကြောင်း သိရပါတယ်။
အသက် ၂၀ နှစ်အရွယ် ကိုနိုင်မင်းကိုဟာ ၂၀၂၁ ခုနှစ် မတ်လ ၅ ရက်နေ့တွင် မန္တလေးမြို့ မြတောင်ဘုန်းကြီးကျောင်း၏ မြောက်ဘက် ၊ ၃၅ လမ်းပေါ် ၈၅ လမ်းနှင့် ၈၆ လမ်းကြား၌ လမ်းဖြတ်ကူးနေစဉ် ရဲနှင့်စစ်တပ်မှ အကြမ်းဖက်ပစ်ခတ်မှုကြောင့် ခြေထောက်ကို ကျည်ဆံထိမှန် မျက်နှာကို ဝိုင်းအကန်ခံရကာ မေ့မျောသွားပြီးနောက် ဖမ်းဆီးခံရပြီး ကျဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်။
ကိုနိုင်မင်းကိုဟာ မိဘများမရှိတော့ဘဲ အစ်မဖြစ်သူနှင့်အတူ မိုးကောင်း ဓမ္မာရုံ အနီး အရှေ့ ပတ္တာရပ် သံလျှက်မော် အရှေ့ရပ် ၈၈ လမ်း ၄၃ လမ်း စိန်ပန်း မန္တလေးတွင် နေထိုင်တာဖြစ်ပြီး ရုပ်အလောင်းကို ပြန်မရကြောင်း သိရပါတယ်။
Nay Myo Oo
အသက် ၃၄ နှစ်အရွယ်ရှိ ကိုနေမျိုးဦးဟာ ၂၀၂၁ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၈ ရက်နေ့တွင် ပခုက္ကူမြို့၊ ထင်တန်းလမ်းနှင့် ရုပ်စုံကျောင်းလမ်းဆုံတွင် ပစ်ခတ်အကြမ်းဖက်မှုကြောင့် ပေါင်တွင်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီး ကားအောက်တွင် ပုန်းကွယ်နေစဉ် ရဲများက ဂုတ်မှဆွဲကာ ဗိုက်အောက်ပိုင်းကို တေ့ပစ်ရမှုကြောင့် ကျဆုံးသွားခဲ့ရပါတယ်။
ကိုနေမျိုးဦးဟာ အိမ်ဆောက်ပစ္စည်းဆိုင်မှာ အလုပ်လုပ်တဲ့ လက်လုပ်လက်စားဝန်ထမ်းဖြစ်ပြီး အမှတ် ၃၊ဂငယ်ကွင်း ၃လမ်း၊ထင်းတန်းလမ်း၊ပခုက္ကူမြို့တွင် နေထိုင်ပါတယ်။ ကျဆုံးချိန်မှာ အိမ်အကူလုပ်ကိုင်သူ ဇနီးဖြစ်သူနှင့်အတူ ၆နှစ်အရွယ်နှင့်၂နှစ်ခွဲအရွယ် သားလေးနှစ်ယောက် ကျန်ရစ်ခဲ့ပါတယ်။
Si Thu Shein
အသက် ၁၇ နှစ်အရွယ် မောင်စည်သူရှိန် ခေါ် မြတ်သူရှိန်ဟာ ၂၀၂၁ ခုနှစ် မတ်လ ၃ ရက်နေ့တွင် မြောက်ဥက္ကလာ ကျောက်ရေတွင်းတံတားထိပ်၌ ရဲနှင့်စစ်တပ်၏ အကြမ်းဖက်ပစ်ခတ်မှုကြောင့် ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ ညာဘက်ရင်အုံကို ကျည်ဆံထိမှန်ပြီး ကျဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်။
မောင်စည်သူရှိန်ဟာ တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းကျောင်းသားတစ်ဦးဖြစ်ပြီး မြောက်ဥက္ကလာမြို့နယ် (ဌ)ရပ်ကွက် မြဥယျာဉ်စိုက်ပျိုးရေးခြံ သစ္စာပန်းလမ်း အိမ်အမှတ်(80)တွင် အဒေါ်ဖြစ်သူနှင့်အတူ နေထိုင်ပါတယ်။
အသက် ၂၇ နှစ်အရွယ် ကိုဇော်မျိုးဟာ ၂၀၂၁ ခုနှစ် မတ်လ ၅ ရက်နေ့တွင် မန္တလေးမြို့၊ ၄၉လမ်း၊ ၁၁၆လမ်း၌ လမ်းကူးရန်စောင့်နေစဉ် အနီးပတ်ဝန်းကျင််မှ အင်ဂျင်နီယာသပိတ်ကို ရဲနှင့်စစ်တပ်မှ အကြမ်းဖက်ဖြိုခွင်းမှုကြောင့် လည်ပင်းမှတစ်ဆင့် နှလုံးသို့ ကျည်ဆံထိမှန်ပြီး ကျဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်။
ကိုဇော်မျိုးဟာ ပရိဘောဂလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်သူဖြစ်ပြီး မန္တလေးမြို့၊ ၄၉လမ်း၊ ၁၁၆လမ်းတွင် နေထိုင်ပါတယ်။ ကျဆုံးချိန်မှာ ဇနီးဖြစ်သူမှာ ငါးလအရွယ်ရင်သွေးလွယ်ထားရပြီး ငါးနှစ်အရွယ် သားလေးငယ်တစ်ဦး ကျန်ရစ်ခဲ့ပါတယ်။
အသက် ၂၅ နှစ်အရွယ်ရှိ ကိုအာကာမိုးဟာ ၂၀၂၁ ခုနှစ် မတ်လ ၃ ရက်နေ့ မြောက်ဥက္ကလာအဝိုင်း ဆန္ဒပြပွဲတွင် ရဲနှင့်စစ်တပ်၏ အကြမ်းဖက်ပစ်ခတ်မှုကြောင့် ဝဲဘက်ရင်အုံကို ကျည်ဆံထိမှန်ပြီး ကျဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်။
ကိုအာကာမိုးဟာ ကိုရီးယားသွားရန် ပြင်ဆင်နေသူဖြစ်ပြီး မြောက်ဥက္ကလာမြို့နယ်၊ အောင်မင်္ဂလာ ၁ လမ်း၊ တံတားကြီးရပ်ကွက်တွင် နေထိုင်ပါတယ်။ ကျဆုံးချိန်မှာ မိဘနှစ်ပါးနှင့်အတူ မွေးချင်းနှစ်ယောက် ကျန်ရစ်ခဲ့ပါတယ်။
အသက် ၄၇ နှစ်အရွယ် ဦးထွန်းမောင်ဟာ ၂၀၂၁ ခုနှစ် မတ်လ ၃ ရက်နေ့တွင် မြောက်ဥက္ကလာဆန္ဒပြပွဲအတွင်း ရဲနှင့်စစ်တပ်၏ အကြမ်းဖက်မှုကြောင့် ခေါင်းကိုရိုက်နှက်ခံထားရပြီး ကျဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်။
ဦးထွန်းမောင်ဟာ မြောက်ဥက္ကလာမြို့နယ် (ဌ)ရပ်ကွက် မြဥယျာဉ်စိုက်ပျိုးရေးခြံ သစ္စာပန်းလမ်း အိမ်အမှတ်(157)တွင် နေထိုင်ပါတယ်။ ကျဆုံးချိန်မှာ ဇနီးဖြစ်သူနှင့် သား တစ်ယောက် သမီး နှစ်ယောက် ကျန်ရစ်ခဲ့ပါတယ်။
အသက် ၂၇ နှစ်အရွယ် ကိုအောင်မြတ်လင်းဟာ ထီးလင်းမြို့နယ် ထန်းပင်ကုန်းရွာတွင် နေထိုင်ပြီး ၂၀၂၁ ခုနှစ် မတ်လ ၇ ရက် ညတွင် မကွေးတိုင်း ထီးလင်းမြို့၌ ရဲတပ်ဖွဲ့၏ အကြမ်းဖက်ဖြိုခွင်းမှုကြောင့် ကျည်ဆံက နှလုံးတည့်တည့်ကို ဖောက်ပြီး ကျောကို ထုတ်ချင်းပေါက်ကာ သေဆုံးခဲ့ရပါတယ်။
အသက် ၄၃ နှစ်အရွယ် ဦးသိန်းလွင်ဟာ ၂၀၂၁ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၈ ရက်နေ့တွင် ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း မူဆယ်မြို့၌ ဆန္ဒထုတ်ဖော်စဉ် ဓားတစ်လက် ကိုင်ဆောင်ထားတဲ့အတွက် ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရကာ ကျဆုံးခဲ့ရပါတယ်။
မတ်လ ၅ ရက်နေ့တွင် ရိုက်နှက်ဒဏ်ရာတွေနဲ့ သေဆုံးသွားတဲ့ ရုပ်အလောင်းကို မူဆယ်မြို့ ဟိုမွန်ရပ်ကွက် နေအိမ်သို့ ပြန်ပို့ခဲ့ပါတယ်။ ကျဆုံးချိန်မှာ ဇနီးဖြစ်သူနှင့် သားသမီး ၅ဦး ကျန်ရစ်ခဲ့ပါတယ်။
အသက် ၂၈ နှစ်အရွယ်ရှိ ကိုဖိုးချစ်ဟာ ၂၀၂၁ ခုနှစ် မတ်လ ၃ ရက်နေ့ မြောက်ဥက္ကလာအဝိုင်း ဆန္ဒပြပွဲတွင် ရဲနှင့်စစ်တပ်၏ အကြမ်းဖက်ပစ်ခတ်မှုကြောင့် ဦးခေါင်းကို ကျည်အတွဲလိုက်ထိပြီး ကျဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်။
ကိုဖိုးချစ်ဟာ ဖွဲပြာရောင်းခြင်း လုပ်ကိုင်ပြီး မြောက်ဒဂုံ ၄၈ ရပ်ကွက် ရှင်တစ်ရာလမ်းတွင် နေထိုင်ပါတယ်။ ကျဆုံးချိန်မှာ ဇနီးဖြစ်သူနှင့် ၆ နှစ်အရွယ် သားလေးတစ်ဦး ကျန်ရစ်ခဲ့ပါတယ်။
အသက် ၃၁ နှစ် အရွယ်ရှိ ကိုသီဟဦးဟာ ၂၀၂၁ ခုနှစ် မတ်လ ၈ရက်နေ့တွင် ဧရာဝတီတိုင်း ဖျာပုံမြို့ သပိတ်စစ်ကြောင်းကို ရဲနှင့်စစ်တပ်မှ အကြမ်းဖက်ဖြိုခွင်းမှုကြောင့် ဝမ်းဗိုက်ကို ကျည်ဆံထိမှန်ပြီး ကျဆုံးသွားခဲ့ရပါတယ်။
ကိုသီဟဦးဟာ ဆန်စက်မှာ အလုပ်လုပ်ကိုင်နေသူဖြစ်ပြီး ဖျာပုံ ၁၆ ရပ်ကွက်မှာ အိမ်ငှါးနေထိုင်ပါတယ်။ ကျဆုံးချိန်မှာ ဇနီးဖြစ်သူနှင့် ၆ နှစ်အရွယ် သမီးလေးတစ်ယောက်၊ ၁ နှစ်အရွယ် သားလေးတစ်ယောက် ကျန်ရစ်ခဲ့ပါတယ်။
Ko Ko Lay
အသက် ၆၂နှစ်အရွယ်ရှိ ဦးကိုကိုလေး ခေါ် ဦးချိုတားဟာ ၂၀၂၁ ခုနှစ် မတ်လ ၈ရက်နေ့တွင် မြစ်ကြီးနားသပိတ်စစ်ကြောင်းကို စစ်တပ်နှင့်ရဲ၏ ပစ်ခတ်ဖြိုခွင်းမှုကြောင့် ဦးခေါင်းကို ကျည်ဆံထိမှန်ပြီး ကျဆုံးခဲ့ရပါတယ်။
ဦးချိုတားဟာ မူလတန်း ကျောင်းဆရာဖြစ်ပြီး မြစ်ကြီးနားမြို့ အောင်နန်းရပ်ကွက်တွင် အစ်ကိုဖြစ်သူနှင့်အတူ အိမ်ငှါးနေထိုင်ပါတယ်။
အသက် ၂၃ နှစ်အရွယ် မောင်ဇင်မင်းထက်ဟာ ၂၀၂၁ ခုနှစ် မတ်လ ၈ရက်နေ့တွင် မြစ်ကြီးနားသပိတ်စစ်ကြောင်းကို စစ်တပ်နှင့်ရဲ၏ ပစ်ခတ်ဖြိုခွင်းမှုကြောင့် သပိတ်ပြည်သူများကို ဒိုင်းကာဖြင့် ကာကွယ်​ပေးရင်း ​ဦးခေါင်းကို ကျည်ဆံထိမှန်ပြီး ကျဆုံးခဲ့ရပါတယ်။
မောင်ဇင်မင်းထက်ဟာ ပန်းတိမ်ဆိုင်မှာ အလုပ်လုပ်ကိုင်နေသူဖြစ်ပြီး မြစ်ကြီးနားမြို့ ရှမ်းစုမြောက်တွင် နေထိုင်ပါတယ်။ ကျဆုံးချိန်မှာ မိခင်ဖြစ်သူနှင့် အစ်မနှစ်ယောက် ကျန်ရစ်ခဲ့ပါတယ်။
Si Thu Soe
အသက် ၁၇ နှစ်အရွယ်ရှိ မောင်စည်သူစိုး ခေါ် ကိုစိုးဟာ ၂၀၂၁ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီ ၂၈ ရက်နေ့တွင် ပဲခူးမြို့၊ ဘူတာကုန်းကျော်တံတားနဲ့ မြစ်ကူးတံတားအနီး၌ စစ်အာဏာရှင်ကို ဆန့်ကျင်ဆန္ဒပြရင်း လည်ပင်းကို ကျည်ဆံထိမှန်ပြီး ကျဆုံးသွားခဲ့ရပါတယ်။
မွန်လူမျိုးလူငယ်တစ်ဦးဖြစ်သော မောင်စည်သူစိုး ဟာ ပဲခူးတိုင်း‌ဒေသကြီး ဇိုင်းဂနိုင်းမြောက်ပိုင်းရပ်ကွက် မနောသုခ ၁လမ်းမှာ မိခင်ဖြစ်သူနှင့်အတူ နေထိုင်ပါတယ်။
အသက် ၃၃ နှစ်အရွယ်ရှိ ကိုရာဇာမင်းဟာ ၂၀၂၁ ခုနှစ် မတ်လ ၃ ရက်နေ့ မြောက်ဥက္ကလာအဝိုင်း ဆန္ဒပြပွဲတွင် ရဲနှင့်စစ်တပ်၏ အကြမ်းဖက်ပစ်ခတ်မှုကြောင့် လက်မောင်း ကျည်ထိမှန်သူအား ဝင်ရောက်ဆွဲခေါ်စဉ် ဦးခေါင်းထိမှန်ပြီး ကျဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်။
ကိုရာဇာမင်းဟာ ရန်ကုန်မြို့ရှိ ကုမ္ပဏီတစ်ခုတွင် ဖေါ့ကလစ်ကားမောင်း လုပ်ကိုင်နေသူ ဖြစ်ပြီး မြတ်မွန်စိတ်ထား ပရဟိတအသင်း၏ အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ လက်ရှိတွင် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး မြောက်ဥက္ကလာပမြို့နယ်တွင် နေထိုင်​ပြီး စျာပနကို သူ့ရဲ့ဇာတိဖြစ်တဲ့ ဧရာဝတီတိုင်း၊ ဇလွန်မြို့နယ်၊ကျုံခမွန်ကျေးရွာမှာ ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ကျဆုံးချိန်မှာ မိဘနှစ်ပါးနှင့်အတူ မွေးချင်း ၃ ယောက် ကျန်ရစ်ခဲ့ပါတယ်။
Zin Ko Ko Zaw
အသက် ၂၃ နှစ်အရွယ် ကိုဇင်ကိုကိုဇော်ဟာ ၂၀၂၁ ခုနှစ် မတ်လ ၃ ရက်နေ့တွင် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး မြင်းခြံမြို့၌ စစ်တပ်နှင့် ရဲများ၏ ပစ်ခတ်ဖြိုခွင်းမှုကြောင့် ဦးခေါင်းပွင့်ကာ နေရာတွင်ပင် သွေးအလိမ်းလိမ်းဖြင့် ကျဆုံးခဲ့ရပါတယ်။
ကိုဇင်ကိုကိုဇော်ဟာ အမှတ် ၁၉ စွန်းလွန်း၊ မြင်းခြံမြို့တွင် မိဘနှစ်ပါးနှင့်အတူ နေထိုင်တာဖြစ်ပြီး မြင်းခြံမြို့၏ ပထမဦးဆုံးကျဆုံးခဲ့ရသော အာဇာနည်ဖြစ်ပါတယ်။ နာရေးပို့ဆောင်ရာတွင် အာဏာသိမ်းစစ်လက်နက်ကိုင်များ၏ လမ်းပိတ်ဆို့မှုကြောင့် အခြားလမ်းမှ ပတ်ကာ နာရေးပို့ဆောင်ခဲ့ရကြောင်း မြို့ခံများမှတစ်ဆင့် သိရပါတယ်။
အသက် ၂၃ နှစ်အရွယ်ရှိ မောင်ထက်ဝေထူးဟာ ၂၀၂၁ ခုနှစ် မတ်လ ၃ ရက်နေ့တွင် မော်လမြိုင်မြို့ သီရိမြိုင်ရပ်ကွက်အတွင်းသို့ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များ၏ အကြမ်းဖက်ပစ်ခတ်မှုကြောင့် အအေးဆိုင်ရှေ့ ထွက်ကြည့်ရင်း ဦးခေါင်းကို သေနတ်ထိမှန်ခဲ့ပြီး နှဖူးမှတဆင့် ဦးနှောက်အတွင်း ကျည်ဆံဝင်ကာ ဦးနှောက်သေဆုံးသွားပြီးနောက် ကျဆုံးခဲ့ရပါတယ်။
မောင်ထက်ဝေထူးဟာ မော်လမြိုင်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတစ်ဦးဖြစ်ပြီး သီရိမြိုင်လမ်းထိပ်တွင် အအေးဆိုင်ဖွင့်လှစ်ထားပါတယ်။ ရော်ဘာခြံလမ်း၊ မုပွန်ရပ်၊ မော်လမြိုင်မြို့တွင် နေထိုင်ပြီး ကျဆုံးချိန်မှာ ဖခင်၊ အစ်ကိုနှစ်ယောက်နှင့် ညီတစ်ယောက် ကျန်ရစ်ခဲ့ပါတယ်။
အသက် ၄၅ နှစ်အရွယ်ရှိ ကိုနိုင်ဝင်းဟာ ၂၀၂၁ ခုနှစ် မတ်လ ၃ ရက်နေ့တွင် မုံရွာမြို့ ပြည်​ထောင်စုလမ်း၊ ဘုရားနီဘုရားအနီး၌ ဆန္ဒပြလူထုအား ရဲနှင့်စစ်တပ်မှ ပစ်ခတ်ဖြိုခွင်းမှုကြောင့် ကျည်ဆံထိမှန်ကာ ကျဆုံးခဲ့ရပါတယ်။
ကိုနိုင်ဝင်းဟာ မုံရွာမြို့၊ နန္ဒဝန်ရပ်၊ ဂန့်ဂေါလမ်းတွင် နေထိုင်သူဖြစ်ပြီး ကျဆုံးချိန်မှာ ဇနီးဖြစ်သူနှင့် ကလေး ၃ ယောက် ကျန်ရစ်ခဲ့ပါတယ်။
Zaw Zaw Moe
အသက် ၃၆ နှစ် အရွယ် ကိုဇော်ဇော်မိုးဟာ ၂၀၂၁ ခုနှစ် မတ်လ ၁၀ ရက်နေ့တွင် မြောက်ဥက္ကလာပမြို့နယ် ခေမာသီလမ်း၊ မြခေမာကန်ရှေ့၌ ရဲတပ်ဖွဲ့နှင့် စစ်သားများ၏ ပစ်ခတ်ဖြိုခွင်းမှုကြောင့် ဆီးခုံဘယ်ဘက်ကို သေနတ်ကျည်ဆံထိမှန်ပြီး သွေးလွှတ်ကြောပေါက်ကာ တင်ပဆုံရိုးလည်း ကျိုးခဲ့ပါတယ်။ မတ်လ ၁၂ ရက်နေ့တွင် မြောက်ဥက္ကလာပဆေးရုံမှာ ကုသမှုခံယူနေရင်း ကျဆုံးခဲ့ရပါတယ်။
ကိုဇော်ဇော်မိုးဟာ အငှါးယာဉ်မောင်း ဆိုက်ကားဆရာတစ်ဦးဖြစ်ပြီး မြောက်ဥက္ကလာ ဘုမ္မာ (၁၃)လမ်းတွင် နေထိုင်ပါတယ်။ ကျဆုံးချိန်တွင် ဇနီးဖြစ်သူနှင့် အရွယ်မရောက်သေးသော သမီးငယ် ၄ ယောက် ကျန်ရစ်ခဲ့ပါတယ်။
အသက် ၂၄ နှစ်အရွယ်ရှိ ကိုထူးအောင်ကျော်ဟာ ၂၀၂၁ ခုနှစ် မတ်လ ၁၀ ရက်နေ့တွင် မြင်းခြံမြို့၌ စစ်တပ်နှင့်ရဲ၏ အကြမ်းဖက်ဖြိုခွင်းမှုကြောင့် မျက်လုံးကို ကျည်ဆန်ထိမှန်ခဲ့ပြီး မန္တလေးကို ပို့ဆောင်ခဲ့ရကာ မတ်လ ၁၁ ရက်နေ့တွင် ဆေးကုသမှုခံယူနေရင်း ကျဆုံးခဲ့ရပါတယ်။
ကိုထူးအောင်ကျော်ဟာ KBZ မြင်းခြံဘဏ်ခွဲ-၂ မှ ဝန်ထမ်းဖြစ်ပြီး ရုပ်အလောင်းကို မန္တလေးမှ မြင်းခြံနေအိမ်ကို ပြန်လည်သယ်ဆောင်ကာ သင်္ဂြိုဟ်ခဲ့ပါတယ်။
Kyi Phyo Wai
အသက် ၁၉ နှစ်အရွယ်ရှိ မောင်ကြည်ဖြိုးဝေဟာ ၂၀၂၁ ခုနှစ် မတ်လ ၁၁ ရက်နေ့တွင် မကွေးတိုင်း ပခုက္ကူခရိုင် မြိုင်မြို့နယ်၌ စစ်တပ်နှင့်ရဲ၏ အကြမ်းဖက်ဖြိုခွင်းမှုကြောင့် နောက်စေ့ကို ကျည်ဆံထိမှန်ကာ ကျဆုံးခဲ့ရပါတယ်။
မောင်ကြည်ဖြိုးဝေဟာ ကျပန်းလုပ်ကိုင်သူဖြစ်ပြီး ကြက်မောက်ရွာ မြိုင်မြို့နယ်တွင် နေထိုင်ပါတယ်။ ကျဆုံးချိန်မှာ မိဘနှစ်ပါးနှင့် မွေးချင်းနှစ်ယောက် ကျန်ရစ်ခဲ့ပါတယ်။
Thet Zaw Oo
အသက် ၃၄ နှစ်အရွယ်ရှိ ကိုသက်ဇော်ဦးဟာ အမှတ် ၁ ထန်းငယ်တောရွာ မြိုင်မြို့နယ်တွင် နေထိုင်ပြီး ၂၀၂၁ ခုနှစ် မတ်လ ၁၁ ရက်နေ့တွင် မကွေးတိုင်း ပခုက္ကူခရိုင် မြိုင်မြို့နယ်၌ စစ်တပ်နှင့်ရဲ၏ အကြမ်းဖက်ဖြိုခွင်းမှုကြောင့် ဆီးခုံကို ကျည်ဆံထိမှန်ကာ ကျဆုံးခဲ့ရပါတယ်။
Aung Kyaw Sint
အသက် ၃၃ နှစ်အရွယ်ရှိ ကိုညဏ်ဝင်း ခေါ် ကိုမြိုင်ဝင်းဟာ ၂၀၂၁ ခုနှစ် မတ်လ ၁၁ ရက်နေ့တွင် မကွေးတိုင်း ပခုက္ကူခရိုင် မြိုင်မြို့နယ်၌ စစ်တပ်နှင့်ရဲ၏ အကြမ်းဖက်ဖြိုခွင်းမှုကြောင့် ကျည်ဆံထိမှန်ကာ ကျဆုံးခဲ့ရပါတယ်။
ကိုညဏ်ဝင်းဟာ အမှတ်(၂) ဘုရားကြီးအရှေ့ဘက် မြိုင်မြို့တွင် နေထိုင်ပြီး ကျဆုံးချိန်မှာ ဇနီးဖြစ်သူနှင့် ကလေး၄ယောက် ကျန်ရစ်ခဲ့ပါတယ်။
အသက် ၁၉ နှစ် အရွယ် ကိုလင်းထက်ဟာ ၂၀၂၁ ခုနှစ် မတ်လ ၁၁ ရက်နေ့တွင် မန္တလေးမြို့ မြတောင် သပိတ်စစ်ကြောင်းကို ရဲနှင့် စစ်တပ်က အကြမ်းဖက် ပစ်ခတ်ဖြိုခွဲခြင်းကြောင့် ကျဆုံးခဲ့ရပါတယ်။
ကိုလင်းထက်ဟာ ဘူမိဗေဒကျောင်းသား ဖြစ်ပြီး အောင်မြေသာစံမြို့နယ်၊ မြောက်ပြင် ၉ လမ်း၊ ထန်တော့ရပ်ကွက်တွင် နေထိုင်ပါတယ်။ ကျဆုံးပြီးနောက် ရုပ်အလောင်းကို စစ်ကားဖြင့် သယ်ဆောင်သွားပြီး မိသားစုထံ ပြန်မပေးခဲ့ကြောင်း သိရပါတယ်။
အသက် ၃၃ နှစ် အရွယ်ရှိ ကိုရွှေအ ခေါ် ကိုဇော်အောင်လေးဟာ ပဲခူးမြို့ ဘူတာကုန်းတံတားအဆင်း မဇင်းလမ်းဆုံ၌ ဆန္ဒပြသူများကို ရပ်ကြည့်နေစဉ် စစ်တပ်နှင့်ရဲတပ်ဖွဲ့များ၏ အကြမ်းဖက်ပစ်ခတ်ခြင်းကြောင့် ဦးခေါင်းကို ကျည်ဆံထိမှန်ပြီး နေရာတွင် သေဆုံးခဲ့ပါတယ်။
မွေးရာပါ အကြားအာရုံ မသန်စွမ်းသဖြင့် ဆွံအ နားမကြားသော ကိုဇော်အောင်ဟာ အနှိပ်ပညာဖြင့် အသက်မွေးသူ ဖြစ်ပြီး ပဲခူးမြို့ မဇင်းရပ်ကွက်တွင် မိသားစုနှင့်အတူ နေထိုင်ပါတယ်။
အသက် ၃၈ နှစ်အရွယ်ရှိ ကိုအောင်ဆန်းဦး ခေါ် ချစ်စမ်းအောင် ဟာ ၂၀၂၁ ခုနှစ် မတ်လ ၃ ရက်နေ့တွင် မုံရွာမြို့ ပြည်ထောင်စုလမ်း ဘုရားနီအနီး၌ စစ်တပ်နှင့်ရဲ၏ အကြမ်းဖက်ဖြိုခွင်းမှုကြောင့် ကျည်ဆန်ထိမှန်ခဲ့ရပြီး လက်မောင်ရင်းပေါက်ထွက်၊ နံရိုးကျိုး၊ အဆုတ်ထိခိုက်ခဲ့ကာ မန္တလေးတွင် ဆေးကုသမှုခံယူနေရင်း ကျဆုံးခဲ့ရပါတယ်။
ကိုအောင်ဆန်းဦးဟာ မိသားစုနှင့်အတူ မုံရွာမြို့ နန္ဒဝန်ရပ်ကွက်တွင် နေထိုင်တာဖြစ်ပြီး ရုပ်အလောင်းကို မွေးရပ်ဇာတိ ထန်းလေးပင်ရွာ နေအိမ်သို့ သယ်ယူခဲ့ပါတယ်။ ကျဆုံးချိန်မှာ ဇနီးဖြစ်သူနှင့် ကလေးတစ်ယောက် ကျန်ရစ်ခဲ့ပါတယ်။
Ko Mang Suan Khai
အသက် ၂၇ နှစ် အရွယ်ရှိ Mang Suan Khai ခေါ် ဝေယံမောင်မောင်ဟာ ၂၀၂၁ ခုနှစ် မတ်လ ၃ ရက်နေ့ မြောက်ဥက္ကလာအဝိုင်း ဆန္ဒပြပွဲတွင်ညအကြမ်းဖက်ပစ်ခတ်မှုကြောင့် ပေါင်ကို ကျည်ဆံထိမှန်ပြီးနောက် အချုပ်ကားပေါ်ပါသွားကာ ဦးခေါင်းကိုရိုက်နှက်ခံရပြီး ကျဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်။
ဝေယံမောင်မောင်ဟာ ချင်း၊ခရစ်ယာန်ဖြစ်ပြီး မိသားစုနှင့်အတူ အရှေ့ဒဂုံမြို့နယ် ၄ ရပ်ကွက် ဗိုလ်ပျိုလမ်းတွင် အိမ်ငှားပြီး နေထိုင်ပါတယ်။ မိသားစုက မြောက်ဥက္ကလာပဆေးရုံ ရင်ခွဲရုံသို့ သွားရောက်ပြီး ရုပ်ကလပ် သွားထုတ်သော်လည်း ပိုင်ရှင်မဲ့အလောင်းဟူ၍ သင်္ဂြုဟ်ခြင်းခံလိုက်ရပါတယ်။
Hla Myo Ko
အသက် ၃၉ နှစ်အရွယ်ရှိ ကိုတိုက်ပေါ်ဟာ ၂၀၂၁ ခုနှစ် မတ်လ ၁၁ ရက်နေ့တွင် မကွေးတိုင်း ပခုက္ကူခရိုင် မြိုင်မြို့နယ်၌ စစ်တပ်နှင့်ရဲ၏ အကြမ်းဖက်ဖြိုခွင်းမှုကြောင့် ဦးခေါင်း အနောက်တည့်တည့်ကို ကျည်ဆံထိမှန်ကာ ဦးနှောက်ထွက်ကျပြီး ကျဆုံးခဲ့ရပါတယ်။
ကိုတိုက်ပေါ် ဟာ တွင်ခုံလုပ်သူဖြစ်ပြီး ကံဘူးရွာ၊ မြိုင်မြို့နယ်တွင် နေထိုင်ပါတယ်။ ကျဆုံးချိန်မှာ CDM ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်း ဇနီးဖြစ်သူနှင့် မူလတန်းအရွယ် သားလေးနှစ်ယောက် ကျန်ရစ်ခဲ့ပါတယ်။
အသက် ၃၇ နှစ်အရွယ်ရှိ ကိုစည်သူဟာ ၂၀၂၁ ခုနှစ် မတ်လ ၁၃ ရက်နေ့တွင် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ သာကေတမြို့နယ် မြင်တော်သာ လမ်းမကြီး မာန်ပြေ (၂)လမ်းအရှေ့လမ်းထိပ် အမှတ်(၁) ရဲစခန်းရှေ့၌ စစ်တပ်နှင့်ရဲတပ်ဖွဲ့များ၏ အကြမ်းဖက်ဖြိုခွင်းမှုကြောင့် ဦးခေါင်းပွင့် ဒဏ်ရာဖြင့် ကျဆုံးခဲ့ရပါတယ်။
ကိုစည်သူဟာ ဆိုက်ကားဆရာဖြစ်ပြီး သာကေတ အမှတ် ၉၂၂ မာန်ပြေ (၃)လမ်း အရှေ့တွင် နေထိုင်ပါတယ်။ ကျဆုံးချိန်မှာ မိခင်နှင့် ဇနီးဖြစ်သူ ကျန်ရစ်ခဲ့ပါတယ်။
Htet Myat Aung
အသက် ၁၈ နှစ်အရွယ်ရှိ ကိုထက်မြတ်အောင်ဟာ ၂၀၂၁ ခုနှစ် မတ်လ ၁၃ ရက်နေ့တွင် ပြည်မြို့၌ စစ်တပ်နှင့်ရဲ၏ အကြမ်းဖက်ဖြိုခွင်းမှုကြောင့် ဗိုက်ကို ကျည်ဆန်ထိမှန်ကာ သွေးထွက်လွန်ပြီး ကျဆုံးခဲ့ရပါတယ်။
မောင်ထက်မြက်အောင်ဟာ ရေကြောင်းတက္ကသိုလ် ပထမနှစ် Marine Mechanical ကျောင်းသားဖြစ်ပြီး ပြည်မြို့ ဆင်စုရပ်ကွက်မှာ နေထိုင်ပါတယ်။ မဆုံးပါးခင်က ဖခင်ဖြစ်သူထံ ဖုန်းဆက်ပြီး ကျည်အစစ်ဖြစ်သော်လည်း မိဘများ စိတ်မပူစေရန် "ရာဘာကျည်မို့ ဘာမှမဖြစ်လောက်ပါဘူး" လို့ ပြောခဲ့ပါတယ်။
Chit Min Thu
အသက် ၂၅နှစ် အရွယ်ရှိ ကိုချစ်မင်းသူဟာ ၂၀၂၁ ခုနှစ် မတ်လ ၁၁ ရက်​နေ့တွင် မြောက်ဒဂုံ ၃၅ ထိပ်၊ ဗိုလ်မင်း​ရောင်လမ်းမ​ပေါ် သပိတ်ကို စစ်တပ်များက အကြမ်းဖက်ဖြိုခွင်းမှုကြောင့် ရှေ့တန်းကနေ ဒိုင်းကာပေးနေရင်း ဦး​ခေါင်းကို ကျည်ဆန်ထိမှန်ပြီး ကျဆုံးခဲ့ရပါတယ်။
ကိုချစ်မင်းသူဟာ မြောက်ဒဂုံ ၄၉ ရက်ကွက်၊ စောခွန်ရစ်လမ်းမှာနေထိုင်ပါတယ်။ "ဒီ​နေ့ ငါမထွက်လို့ ငါလိုလူ​တွေများရင် ဒီနိုင်ငံကြီး ဒီမိုက​ရေစီမရ​တော့ဘူး" လို့ ပြောပြီး ဆန္ဒထုတ်ဖော်ဖို့ ထွက်လာခဲ့တာပါ။ ကျဆုံးချိန်တွင် ကိုယ်ဝန် ၂လ လွယ်ထားရသော ဇနီးဖြစ်သူနှင့် ၃ နှစ်အရွယ် သားလေး ကျန်ရစ်ခဲ့ပါတယ်။
Aung Aung Zaw
အသက် ၄၁ နှစ်အရွယ်ရှိ ကိုအောင်အောင်ဇော်ဟာ ၂၀၂၁ ခုနှစ် မတ်လ ၁၃ ရက်နေ့တွင် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ သာကေတမြို့နယ်၌ ဖမ်းဆီးသွားသော လူငယ်များကို ပြန်လွှတ်ပေးဖို့ တောင်းဆိုနေစဉ်စစ်တပ်နှင့်ရဲတပ်ဖွဲ့များ၏ အကြမ်းဖက်ပစ်ခတ်ခြင်းကြောင့် ဦးခေါင်းကို ကျည်ဆန်ထိမှန်ပြီး ကျဆုံးခဲ့ရပါတယ်။
ကိုအောင်အောင်ဇော်ဟာ သာကေတ အမှတ် ၈၉၈၊ မာန် ၃လမ်း အနောက်တွင် နေထိုင်ပါတယ်။ ကျဆုံးချိန်မှာ ဇနီးဖြစ်သူနှင့် ၁၀တန်းတက်မယ့် သားငယ်လေးတစ်ယောက် ကျန်ရစ်ခဲ့ပါတယ်။
Kyaw Zin Latt
အသက် ၄၁ နှစ် အရွယ်ရှိ ကိုကျော်ဇင်လတ် ခေါ် ကိုရှည်ကြီးဟာ မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ် မြသီတာရပ်ကွက်၌ ကင်းစောင့်ရင်း အကြမ်းဖက်ပစ်ခတ်ခံရကာ ညာဘက်ရင်အုံကို ကျည်ဆံထိမှန်ပြီး နေရာတွင်ပင် ကျဆုံးခဲ့ရပါတယ်။
ကိုကျော်ဇင်လတ်ဟာ ယာဉ်မောင်းလုပ်သား တစ်ဦးဖြစ်ပြီး မြသီတာရပ်ကွက်၊ အိမ်ခြေ ၄၀၊ မြကန်သာ ၂လမ်းတွင် နေထိူင်ပါတယ်။ ကျဆုံးချိန်မှာ ဇနီးသည်နှင့် ကလေးနှစ်ယောက် ကျန်ရစ်ခဲ့ပါတယ်။
အသက် ၅၆ နှစ် အရွယ်ရှိ ဦးဝင်းဌေး ခေါ် ဦးရှမ်းကြီးဟာ ၂၀၂၁ ခုနှစ် မတ်လ ၁၃ ရက်နေ့တွင် မန္တလေးမြို့ မဟာအောင်မြေမြို့နယ် စိန်ပန်းရပ်ကွက်၌ ရဲနှင့်စစ်တပ်၏ အကြမ်းဖက်ဖြိုခွင်းမှုကြောင့် လက်မောင်းနှင့် ရင်ဘတ်ကို ကျည်ဆန်ထိမှန်ပြီး ကျဆုံးခဲ့ရပါတယ်။
ဦးဝင်းဌေးဟာ မန္တလေးမြို့ စိန်ပန်းရပ် ဥပုသ်တော် ရွှေတိုးရပ်တွင် နေထိုင်ပါတယ်။ ကျဆုံးချိန်မှာ ဇနီး၊ သားတစ်ယောက်၊ သမီးတစ်ယောက်၊ မြေး နှစ်ယောက် ကျန်ရစ်ခဲ့ပါတယ်။
Saw Pyae Naing
အသက် ၂၁ နှစ်အရွယ်ရှိ ကိုစောပြည့်နိုင်ဟာ ၂၀၂၁ ခုနှစ် မတ်လ ၁၃ ရက်နေ့တွင် စိန်ပန်းရပ်ကွက်အတွင်း မန္တလေးတပ်ပေါင်းစု သပိတ်စစ်ကြောင်း ပိတ်ဆို့အကြမ်းဖက်ဖြိုခွင်းခံရစဉ် ဝမ်းဗိုက်ကို ကျည်ဆန်ထိမှန်ပြီး ကျဆုံးခဲ့ရပါတယ်။
ကိုစောပြည့်နိုင်ဟာ ဗမာတစ်နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ကျောင်းသားသမဂ္ဂ သပိတ်စစ်ကြောင်းမှ Defence Team အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦး ဖြစ်ပြီး မဟာအောင်မြေမြို့နယ် စံပြရပ်ကွက်၊ သဲကျင်းတွင် နေထိုင်ပါတယ်။ ကျဆုံးချိန်မှာ မိဘနှစ်ပါးနှင့် မွေးချင်းမောင်နှမ ၃ ဦး ကျန်ရစ်ခဲ့ပါတယ်။
အသက် ၄၁ နှစ် အရွယ်ရှိ ကိုဇော်မင်းထွန်း ခေါ် ကိုငယ်ဟာ မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ် မြသီတာရပ်ကွက်၌ ကင်းစောင့်ရင်း အကြမ်းဖက်ပစ်ခတ်ခံရကာ ဆီးခုံတွင် သေနတ်ဒဏ်ရာရရှိပြီးနောက် စစ်တပ်မှ ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားပြီး နောက်တစ်နေ့တွင် ကျဆုံးခဲ့ပါတယ်။
ကိုဇော်မင်းထွန်းဟာ မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ် ပျဉ်းမပင်ကျေးရွာအုပ်စု မြသီတာရပ်ကွက် ဗဟိုလမ်းတွင် နေထိုင်ပါတယ်။ ကျဆုံးချိန်မှာ ဇနီးဖြစ်သူနှင့် အရွယ်မရောက်သေးတဲ့ ကလေးငယ် ၃ ယောက် ကျန်ရစ်ခဲ့ပါတယ်။ အငယ်ဆုံးသမီးလေးက ၉ လ ပဲ ရှိပါသေးတယ်။
အသက် ၅၁ နှစ် အရွယ်ရှိ ဦးဝင်းလှိုင်ဟာ ၂၀၂၁ ခုနှစ် မတ်လ ၁၁ ရက် ညတွင် ထားဝယ်မြို့တောင်ဘက် ကြက်စားပြင်ရပ်ကွက်ရှိ သရက်ချောင်းကားဂိတ်ရှိရာ လမ်းဆုံ၌ စစ်တပ်နှင့်ရဲ၏ အကြမ်းဖက်ပစ်ခတ်မှုကြောင့် ဘယ်ဘက်လက်မောင်းကို ကျည်ထိမှန်ပြီး နှလုံးရှိရာ ရင်ဘတ်ကိုပါ ဖောက်ဝင်သွားကာ ကျဆုံးခဲ့ရပါတယ်။
ဦးဝင်းလှိုင်ဟာ သုံးဘီးတက္ကစီမောင်းသူဖြစ်ပြီး အရန်မီးသတ်တပ်ဖွဲ့တွင် တပ်ကြပ်ကြီးတစ်ဦးလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ကျဆုံးချိန်တွင် ဇနီးဖြစ်သူ၊ သမီးနှစ်ဦး နှင့် မြေးတစ်ဦး ကျန်ရစ်ခဲ့ပါတယ်။
Aung Paing Oo
အသက် ၃၂ နှစ်အရွယ်ရှိ ကိုရဲဆွေဦးဟာ ၂၀၂၁ ခုနှစ် မတ်လ ၁၃ ရက်နေ့တွင် မန္တလေးမြို့ စိန်ပန်းရပ်၌ စစ်တပ်နှင့်ရဲ၏ အကြမ်းဖက်ဖြိုခွင်းမှုကြောင့် ဘယ်ဘက်နောက်ကျောကနေ ရင်ဘတ်ထုတ်ချင်းပေါက် ကျည်ဆန်ထိမှန်ကာ ကျဆုံးခဲ့ရပါတယ်။
ကိုရဲဆွေဦးဟာ ဖိနပ်လုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်သူဖြစ်ပြီး ခုံဖိနပ်ချောင် အကွက် (၅၁၀-က) တွင် နေထိုင်ပါတယ်။ ကျဆုံးချိန်မှာ ဇနီးဖြစ်သူနှင့် ၆ နှစ်အရွယ် သမီးငယ်လေး တစ်ဦး ကျန်ရစ်ခဲ့ပါတယ်။
Ye Swe Oo
Htet Wai Yan Hein
အသက် ၂၀ နှစ်အရွယ်ရှိ ကိုထက်ဝေယံဟိန်း ခေါ် ကိုဖြိုးဝေယံကျော်ဟာ ၂၀၂၁ ခုနှစ် မတ်လ ၁၃ ရက်နေ့တွင် ပြည်မြို့၌ စစ်တပ်နှင့်ရဲ၏ အကြမ်းဖက်ဖြိုခွင်းမှုကြောင့် ကျည်ဆံထိမှန်ကာ ဖမ်းဆီးခံရပြီးနောက် ကျဆုံးခဲ့ရပါတယ်။
ကိုထက်ဝေယံဟိန်းဟာ ပြည်မြို့ ခေတ္တရာပန်းခြံရှေ့ ကျွန်းတောကျောင်းအနီးတွင် နေထိုင်ပါတယ်။ ဖခင်ဖြစ်သူက လက်သမားအလုပ်လုပ်ကိုင်ပြီး မိခင်ဖြစ်သူက ဆပ်ပြာအဆီဗူးလုပ်ကြောင်း သိရပါတယ်။
အသက် ၄၆ နှစ်အရွယ်ရှိ ကိုဇော်မြတ်လင်းဟာ ၂၀၂၁ ခုနှစ် မတ်လ ၈ရက် ညသန်းခေါင်ယံချိန်တွင် ရဲနှင့် စစ်တပ်၏ အဖမ်းဆီးခံခဲ့ရပြီီး ဒဏ်ရာဒဏ်ချက်များနှင့် ကျဆုံးသွားခဲ့ရပါတယ်။
ကိုဇော်မြတ်လင်းဟာ ရွှေပြည်သာမြို့နယ်ရှိ စုသက်မွေး သိပ္ပံကျောင်းတာဝန်ခံဖြစ်ပြီး ရွှေပြည်သာမြို့နယ် ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ကိုဇော်မြတ်လင်းနှင့်အတူ သက်မွေးသိပ္ပံကျောင်းသား ၇ယောက်လည်း ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရပြီး လက်ကိုင်ဖုန်းများနှင့် ကျောင်းမှ ကွန်ပြူတာလက်တော့ပ်များကိုလည်း အသိမ်းဆည်းခံလိုက်ရပါတယ်။
အသက် ၁၈ နှစ်အရွယ် မောင်နေနေဝင်းထက်ဟာ ၂၀၂၁ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီ ၁၅ ရက်နေ့ညတွင် မြိတ်မြို့၌ အလှည့်ကျမီးကင်းစောင့်ရင်း ဦးခေါင်းအရိုက်ခံခဲ့ရပြီး ပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၉ ရက်နေ့ မနက်တွင် ပရဟိတအသင်းကားဖြင့် မြိတ်မှ ရန်ကုန်ဆေးရုံသို့ ထွက်ခွါလာခဲ့ရာ လမ်းတစ်ဝက်၌ ဦးခေါင်းပြင်းထန်ဒဏ်ရာဖြင့် ကျဆုံးခဲ့ရပါတယ်။
မောင်နေနေဝင်းထက်ဟာ တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတစ်ဦးဖြစ်ပြီး မြဝင့်ဝါလမ်း၊ မြိတ်တောင်ရပ်၊ မြိတ်မြို့မှာ မိဘနှစ်ပါးနှင့်အတူ နေထိုင်ပါတယ်။
Ko Ko Oo
အသက် ၃၂ နှစ်အရွယ်ရှိ ကိုကိုဦး ခေါ် ကိုနပွားဟာ ၂၀၂၁ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ ၈ ရက်နေ့တွင် မန္တလေး၌ ငြိမ်းချမ်းစွာ ဆန္ဒပြအပြီး ညဘက် ပြန်အလာတွင် ရဲကားဖြင့် ဆင့်တိုက်ခံခဲ့ရပြီး ကျဆုံးသွားခဲ့ရပါတယ်။
ကိုကိုဦးဟာ စက္ကြာနွယ်ဝင်ရပ်ကွက် ၇၅လမ်း၊၃၇×၃၈လမ်းကြား၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးတွင် နေထိုင်သူဖြစ်ပြီး စစ်အာဏာသိမ်းတပ်များ၏ အကြမ်းဖက်မှုကြောင့် ပထမဆုံးသေဆုံးခဲ့သူ ဖြစ်ပါတယ်။
အသက် ၁၈ နှစ်အရွယ်ရှိ မောင်အောင်မြင့်မြတ်ဟာ ၂၀၂၁ ခုနှစ် မတ်လ ၃ ရက်နေ့ မကွေးတိုင်း စလင်းမြို့ ရဲစခန်းရှေ့တွင် ဆန္ဒပြနေစဉ် ရဲတပ်ဖွဲ့၏ အကြမ်းဖက်ပစ်ခတ်မှုများကြောင့် ဦးခေါင်းကို သေနတ်ထိမှန်ကာ နားရွက်နောက်မှ နဖူးကို ကျည်ဆံဖေါက်ထွက်ပြီး ကျဆုံးသွားခဲ့ရပါတယ်။
မောင်အောင်မြင့်မြတ်ဟာ ၅ ဘာသာ ဂုဏ်ထူးရှင်တစ်ဦးဖြစ်ပြီး TU B.E (civil) ဒုတိယနှစ်တက်ရောက်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။
အသက် ၂၃ နှစ်အရွယ် ကိုညီညီအောင်ထက်နိုင်ဟာ ၂၀၂၁ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၈ ရက်နေ့တွင် ရန်ကုန်တိုင်း ကမာရွတ်မြို့နယ် လှည်းတန်းလမ်း အ.ထ.က(၅) ကျောင်းရှေ့၌ စစ်တပ်နှင့်ရဲတပ်ဖွဲ့၏ အကြမ်းဖက်ပစ်ခတ်မှုများကြောင့် ​သေနတ်ကျည်ဆံထိမှန်ကာ ရင်ဘတ်အောက် ဝမ်းဗိုက်အစပ်နား ထုတ်ချင်းပေါက်ဒဏ်ရာဖြင့် သွေးထွက်လွန်ကာ ကျဆုံးသွားခဲ့ရပါတယ်။
ကိုညီညီအောင်ထက်နိုင်ဟာ Network Engineer ဖြစ်ပြီး ရန်ကုန်တိုင်း ၊ ​လှော်ကား ရွှေပြည်သာ ၊ ၂၇ ရပ်ကွက်တွင် မိခင်ဖြစ်သူ၊ အမွှာအစ်ကိုနှင့်အတူ နေထိုင်ပါတယ်။ ကျည်ထိထားချိန်တွင် မိခင်ဆီ ဖုန်းဆက်၍ " သားထိသွားပြီ မေမေ ၊ သားမရတော့ဘူး မေမေ " လို့ ပြောခဲ့ပြီး နောက်ဆုံးချိန်မှာတောင် အသက်ကယ်လှည်းပေါ်၌ လက်၃ ​ချောင်းထောင် ဆန့်ကျင်ဆန္ဒပြခဲ့ပါတယ်။ မကျဆုံးခင် ရှေ့ညက #How_Many_Dead_Bodies_UN_Need_To_Take_Action? လို့ ဖေ့ဘုတ်မှာ ရေးသားခဲ့တာကို တွေ့ရပါတယ်။
Wai Yan Htun
အသက် ၁၇ နှစ်အရွယ်ရှိ မောင်ဝေယံထွန်းဟာ ၂၀၂၁ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၀ ရက်နေ့တွင် မန္တလေးမြို့၊ မဟာအောင်မြေမြို့နယ်၊ ကမ်းနားလမ်း ဆန္ဒပြပွဲအတွင်း အကြမ်းဖက်ပစ်ခတ်မှုကြောင့် ဦးခေါင်းကို ကျည်ထိမှန်ပြီး ကျဆုံးသွားခဲ့ရပါတယ်။
မောင်ဝေယံထွန်းဟာ မန္တလေးတိုင်း ၊ အမရပူမြို့နယ် ၊ မြစ်ငယ်မြို့ ၊ မြို့အိမ်ကြီးရွာ ဇာတိဖြစ်ပြီး မိဘနဲ့မနေဘဲ မန္တလေးမှာ တစ်ယောက်ထဲလာနေရင်း ညစျေးမှာ ကုန်စိမ်းတွန်းလှည်းတွန်းတဲ့အလုပ် လုပ်ကိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ဘဝမှာ ကိုယ်ပိုင်ဖုန်းလေးတစ်လုံးနဲ့ ဆိုင်ကယ်လေးတစ်စီးရှိရင် ဆိုတဲ့ ရည်မှန်းချက်နဲ့ ပိုက်ဆံရှာပြီး စုဗူးလေးနဲ့စုနေခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။
အသက် ၁၉ နှစ် အရွယ်ရှိ မကြယ်စင် ခေါ် Deng Jia Xi ဟာ ၂၀၂၁ ခုနှစ် မတ်လ ၃ ရက်နေ့တွင် မန္တလေးမြို့ ၈၄လမ်းနဲ့ လမ်း၃၀ ဝန်းကျင်၌ စစ်တပ်၏ အကြမ်းဖက်ဖြိုခွင်းမှုကြောင့် နောက်စေ့ကို ကျည်ဆံထိမှန်ကာ ကျဆုံးခဲ့ရပါတယ်။
မကြယ်စင်ဟာ တစ်ဦးတည်းသော သမီးဖြစ်ပြီး ၇၈×၈၀၊ ၃၃လမ်း၊ မန္တလေးမြို့တွင် မိဘနှစ်ဦးနှင့်အတူ နေထိုင်ပါတယ်။ မကျဆုံးခင် တစ်ရက်အလိုတွင် သူမအနေနဲ့ တစ်ခုခုဖြစ်ခဲ့ပါက သွေး၊ မျက်ကြည်လွှာ၊ ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးကို လှူဒါန်းမည့်အကြောင်း ဖေ့ဘုတ်မှာ ရေးသားခဲ့ပါတယ်။ သူမအား မတ်လ ၄ရက်နေ့က ဂူသွင်းသဂြိုလ်မှု ပြုလုပ်ခဲ့ပြီးနောက် မတ်လ ၅ရက် ညနေပိုင်းတွင် ရုပ်အလောင်းကို တူးဖော်စစ်ဆေးခံခဲ့ရကြောင်း ယူနန်သုသာန်ဝန်ထမ်းများ၊ မိသားစုနှင့် နီးစပ်သူများထံမှ သိရှိရပါတယ်။
Mya Thwe Thwe Khine
အသက် ၁၉ နှစ်အရွယ်ရှိ မမြသွဲ့သွဲ့ခိုင်ဟာ ၂၀၂၁ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ ၉ ရက်နေ့တွင် နေပြည်တော် သပြေကုန်းဝိုင်း၌ စစ်အာဏာရှင်စနစ်အား ဆန့်ကျင်ဆန္ဒပြရင်း ဦးခေါင်းကို ကျည်ထိမှန်ပြီး ဦးနှောက်သေဆုံးသွားခဲ့ကာ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၉ရက်နေ့ နေ့လယ် ၁၁နာရီ၁၅မိနစ် နေပြည်တော် ကုတင် ၁၀၀၀ဆေးရုံတွင် ကွယ်လွန်ခဲ့ပါတယ်။
မမြသွဲ့သွဲ့ခိုင်ဟာ နေပြည်တော်၊ပျဥ်းမနား၊အထက်ပေါင်းလောင်းဆည်၊နန်ချိုစက်ရုံ၊ဝန်ထမ်းအိမ်ရာ မိသားစုတန်းလျားတွင် မိခင်နှင့်အတူ နေထိုင်သူဖြစ်ပြီး စစ်အာဏာရှင်စနစ်အား ဆန့်ကျင်ဆန္ဒပြနေရင်း ပထမဆုံး ကျဆုံးခဲ့ရတဲ့ သူရဲကောင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
Copyright © 2021 Nway Oo Heroes - All Rights Reserved.